ကိုဒီယမ်မှီခိုမှုရှိ Dopamine ဂီယာ၏အလားအလာအထူးပြုအဖြစ် Striatum တွင် Kappa-Opioid Receptor အချက်ပြခြင်း (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်အတွက်
ကင်းမူတည်အတွက် Dopamine ဂီယာတစ်နိုင်သည့်အလားအလာ, Module အဖြစ် Striatum အတွက် Kappa-Opioid receptor signal (2013)
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 4: 44 ။
2013 ဇွန်3အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2013.00044
Pierre ၏ Trifilieff1,2 နှင့် ဒိုင်ယာနာ Martinez1,*
ကိုကင်းစွဲအဖြစ် striatum အတွက်တုံး dopamine လွှတ်ပေးရန် binding dopamine D2 အဲဒီ receptor အတွက်ကျဆင်းခြင်းအဖြစ်တိုင်းတာ striatal dopamine အချက်ပြတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းကြောင့်လိုက်ပါသွားသည်။ dopamine ဂီယာတွင်ဤပွောငျးလဲလက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိသည်, ကိုကင်း-ရှာအပြုအမူများနှင့်ကင်းမှီခိုဘို့ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အတူပတျသကျပြပြီ။ သို့သျောလညျးကိုကင်းစွဲအတွက် hypodopaminergic ပြည်နယ်မှပံ့ပိုးသည့်ယန္တရားများမသိသောရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အလားအလာများနှင့် dopamine ကင်းချိုးဖောက်ဂီယာနှင့်ကိုကင်း-ရှာအပြုအမူမှာသူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုစညျး D2 အဲဒီ receptor မြားတှငျပွောငျးလဲဖေါ်ပြခြင်းပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (PET) ကို positron ထုတ်လွှတ် tomography ပြန်လည်သုံးသပ်။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကိုကင်းထိတွေ့အောက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ dopamine ဂီယာနှင့် upregulation အပေါ်သက်ရောက်မှုများ, အ Kappa အဲဒီ receptor / dynorphin စနစ်အကြောင်းအဆိုပြု, ကိုကင်းစွဲအစီရင်ခံသည့် hypodopaminergic ပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း, ထို့ကြောင့်ကုသမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင် ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
keywords: ပုံရိပ်, Kappa opioid အဲဒီ receptor, dopamine, ကိုကင်းမှီခို, striatum, dopamine အဲဒီ receptor
လူသားတွေအတွက်ကိုကင်းစွဲနှင့်အတူဆက်စပ် neurochemistry imaging လေ့လာရေးအကြီးအကျယ် striatum အတွက် dopamine အချက်ပြအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကြောင့် Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုပြသနေတဲ့လှုံ့ဆော်၏အုပ်ချုပ်မှုတုံ့ပြန်အတွက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်းချိုးဖောက်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျော့ချရေးတိုးမြှင့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူနှင့်အတူပတျသကျပြခဲ့ပြီးကတည်းကဒီဒီရောဂါများအတွက်အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ယခင်လေ့လာမှုများ abstinence ၏ 14 ရက်သတ္တပတ်မဟုတ် (Bisaga et al ပြုပါတဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုများအောင်မြင်ရန်သူကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးပြသခဲ့ကြပြီးကတည်းကအရေးကြီးသည့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ, လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ရသောအကြောင်းကို2ရက်ပေါင်း abstinence မှာဖျော်ဖြေခဲ့ကြ။ , 2010; Oliveto et al ။ , 2012) ။ ထို့ကြောင့်တုံး dopamine လွှတ်ပေးရန်နောက်ကွယ်မှယန္တရားများ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ striatal dopamine လွှတ်ပေးရေး Kappa အဲဒီ receptor မှာသရုပ်ဆောင် dynorphin ဖြစ်ပါတယ်ထိန်းညှိဖို့လူသိများကြသည်ဖြစ်နိုင်ချေယန္တရားများများထဲတွင်။ အဆိုပါ striatum အတွက် Kappa အဲဒီ receptor activation (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Koob နှင့် Le Moal တွေ့မြင် striatal dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့် dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအပြင်, လှုံ့ဆော်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တားစီးပြခဲ့ပြီး, 2008; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013) ။ , ထို့အပြင်လူနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများ dynorphin သိသိသာသာနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့အောက်ပါ upregulated ကြောင်းပြသ, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုရှည်လျား Koob နှင့် Le Moal ကြည့်မြင်ပြန်လည်သုံးသပ် (ရေရှည်တည်တံ့ကြောင်း 2008; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013), လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက် abstinence ၏2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်မြင်ကြ dopamine အချက်ပြအတွင်းလျော့နည်းသွားများအတွက်အကောင့်နိုင်သည့်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ dynorphin အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်မြင့်ကိုကင်းစွဲလေ့လာသည့် hypodopaminergic ပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုခြင်းဒေတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်။
ကိုကင်းစွဲအတွက် Dopamine ဂီယာ၏ပေ Imaging
Positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်စွဲနှင့်အတူဆက်စပ် neurochemistry ၏ပုံရိပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ပုံရိပ်နည်းလမ်းတိကျတဲ့အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျကြောင်း radionuclide-တံဆိပ်ကပ် ligands ကိုအသုံးပြုသည်ကို၎င်း, radioligands စွဲသုတေသနတံဆိပ်အများစုမကြာခဏ dopamine receptors ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ (D2 အဖြစ်ရည်ညွှန်း) receptors ၏ dopamine အမျိုးအစား2မိသားစုတံဆိပ်ကပ်ကြောင်း Radiotracers လည်း extracellular dopamine ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည် extracellular dopamine ပြောင်းလဲမှုများမှအထိခိုက်မခံဖြစ်ကြောင်း radiotracers နှင့်အတူ imaging နှင့် (ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ် methylphenidate ကဲ့သို့) တစ်ဦး psychostimulant ၏အုပ်ချုပ်မှုမီနှင့်အပြီး Scan ဖတ်ရယူခွငျးအားဖွငျ့ဖျြောဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစိတ်ကြွဆေးပုံမှာပြထားတဲ့ radiotracer မှခညျြနှောငျမှရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း dopamine receptors တစ်လျော့ချရေးအတွက်ရလဒ်များအရာ extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်, တိုးမြှင့် Figure1.1။ လုံးဝနားမလည်ဖြစ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဒီနည်းလမ်းကိုအများဆုံး D2 အဲဒီ receptor radiotracers နှင့်အတူဒါပေမယ့်မ D1 အဲဒီ receptor မှခညျြနှောငျကြောင်း radiotracers နှငျ့အသုံးပွုနိုငျသညျ။ ထို့ကြောင့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (ထိုကဲ့သို့သော [2C] raclopride အဖြစ်သို့မဟုတ် [11F] fallypride) ကို D18 အဲဒီ receptor radiotracers သုံးပြီးထိုကဲ့သို့သော [1C] NNC11 သို့မဟုတ် [112C] အဖြစ် D11 အဲဒီ receptor တံဆိပ်ကပ်ကြောင်း radiotracers (သော်လည်း, endogenous dopamine ပြောင်းလဲမှုများတိုင်းတာဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်SCH23390) ဗြ Dargham et al (မနိုင်။ , 1999; Chou et al ။ , 1999; Laruelle, 2000; Martinez နှင့် Narendran, 2010).
ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်အတွက် PET Scan ဖတ်။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်ထိပ်ပြား (အကျူးနဲ့ post-စိတ်ကြွဆေးအုပ်ချုပ်ရေး) ၏နှိုင်းယှဉ် radiotracer ([11C] raclopride) binding စိတ်ကြွဆေးအောက်ပါ striatum အတွက်လျော့ချကြောင်းပြသထားတယ်။ ...
radioligand ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်အဓိကရလဒ်အတိုင်းအရှည် radiotracer မှ binding အဲဒီ receptor ဖြစ်ပါသည်, Innis et al (Non-တိကျတဲ့ binding မှတိကျတဲ့များ၏အချိုးအဖြစ်သတ်မှတ်, BPND အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ , 2007) ။ လှုံ့ဆော်အုပ်ချုပ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ extracellular dopamine အတွက်အပြောင်းအလဲလှုံ့ဆော်အောက်ပါအခြေခံ BPND (Pre-လှုံ့ဆော်အုပ်ချုပ်ရေး) နှင့် BPND နှိုင်းယှဉ်တိုင်းတာသည်။ [- / BPNDbaseline (BPNDchallenge BPNDbaseline)] ဒီအဖြစ်သတ်မှတ် BPND, ဒါမှမဟုတ်ΔBPNDအတွက်ရာခိုင်နှုန်းကအပြောင်းအလဲ, ရယူထားခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ Non-လူ့မျောက်ဝံများအတွက်ယခင်လေ့လာမှုများΔBPND microdialysis (Breier et al နှင့်အတူတိုင်းတာ extracellular dopamine အတွက်အပြောင်းအလဲနှင့်အတူ linearly ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်းပြသကြ။ , 1997; Endres et al ။ , 1997; Laruelle et al ။ , 1997) ။ ထို့ကြောင့်ΔBPNDလှုံ့ဆော်-သွေးဆောင် Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရေးတစ်ခုသွယ်ဝိုက်အတိုင်းအတာပေးပါသည်နှင့်ကိုကင်းမှီခိုအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း dopamine အချက်ပြအတွင်းကိုပြောင်းလဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကိုကင်းစွဲအတွက် dopamine receptors ၏ပေပုံရိပ်
ယနေ့အထိ, ခြောက်လလေ့လာမှုများကိုကင်းချိုးဖောက်သည့် D2 အဲဒီ receptor imaging ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ, ဤတသမတ်တည်းလိုက်ဖက်ထိန်းချုပ်မှု (Volkow et al နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ striatum အတွက် binding အတွက်ကျဆင်းခြင်းကိုပြ။ , 1990, 1993, 1997; Martinez et al ။ , 2004, 2009a, 2011) ။ အဆိုပါကျဆင်းခြင်း 15-20% အကြောင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံး ventral နှင့် dorsal striatum ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အရေးကြီးတာက, ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ရန် striatum အတွက်အနိမ့် D2 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်, (မော်ဂန် et al သာ. ကွီးမွတျကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ပြရန်။ , 2002; Czoty et al ။ , 2004; Nader et al ။ , 2006; Dalley et al ။ , 2007) ။ လူသားတွေအတွက် imaging လေ့လာမှုများ Volkow (ထို striatum အတွက်ကင်းချိုးဖောက် binding အနိမ့် striatal D2 အဲဒီ receptor အဆိုပါ orbito-တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ cingulate gyrus အတွက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်, အရာဖြစ်စဉ်ကို Drive နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်ဆက်လက်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါပြသ et al ။ , 1993, 1999) ။ အများအပြားကရေးသားသူစွဲအတွက် binding D2 အဲဒီ receptor ပြောင်းလဲမှုများထိုကဲ့သို့သောသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးသို့မဟုတ်တိုးလာ Impulse (Everitt et al မရှိခြင်းအဖြစ်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်မှုမှအမူအကျင့်အားနည်းချက်, ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ကြောင်းအဆိုပြုထားကြ။ , 2008; Dalley et al ။ , 2011; Groman နှင့် Jentsch, 2012).
တဦးတည်းပေပုံရိပ်လေ့လာမှု Martinez et al (ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက် binding D1 အဲဒီ receptor တိုင်းတာလျက်ရှိသည်။ , 2009b) ။ ဒီလေ့လာမှုက striatal D1 အဲဒီ receptor mRNA (Meador-Woodruff et al တစ် Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုနှင့်ကိုက်ညီသောအရာထိန်းချုပ်မှု, နှိုင်းယှဉ်ကင်းချိုးဖောက် binding D1 အဲဒီ receptor မကွာခြားချက်ပြသခဲ့သည်။ , 1993) ။ သို့သော်ပုံရိပ်လေ့လာမှုလည်းကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွင်း, အ ventral striatum အတွက် binding အနိမ့် D1 အဲဒီ receptor Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ရွေးချယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, ထိုပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီတွေ့ရှိချက်ဟာ limbic striatum အတွက် binding အနိမ့် D1 အဲဒီ receptor ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်ခု သာ. ကြီးမြတ်အားနည်းချက်နှင့်ဆက်စပ်သောတစ်ဦး phenotype ကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။ ဤသည် D1 receptors ၏ဆွဟာ D1 အဲဒီ receptor Enhancer, ကိုကင်းများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု (Haney et al ၏ပိတ်ဆို့သော်လည်း, လျော့နည်းစေကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းလူသားတွေအတွက် pharmacologic လေ့လာမှုများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌တည်ရှိ၏။ , 1999, 2001) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှု D1 အဲဒီ receptor မှာအချက်ပြလျော့နည်းသွားကြောင်းညွှန်ပြပိုပြီးကင်း-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
ကိုကင်းချိုးဖောက်ပေပုံရိပ် dopamine လွှတ်ပေးရန်
Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုင်းတာ imaging လေ့လာမှုများကိုကင်းမှီခိုနေတဲ့လှုံ့ဆော်စိန်ခေါ်မှုဖို့ dopamine စနစ်၏တုန့်ပြန်နေတဲ့လျော့ချရေးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကျန်းမာလူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်တစ်ဦး psychostimulant ၏အုပ်ချုပ်မှု [11C] 15-20% ၏ (ΔBPND) (Volkow et al binding raclopride ။ အတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းထုတ်လုပ် 1994; Drevets et al ။ , 2001; Martinez et al ။ , 2003; Munro et al ။ , 2006), ဒါပေမယ့်ကင်းထဲမှာ [11C] raclopride binding သိသိသာသာ Volkow et al (ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေဖြစ်ပါတယ်။ အတွက်ကျဆင်းခြင်း abusers 1997; Malison et al ။ , 1999; Martinez et al ။ , 2007b, 2011) ။ ထို့ကြောင့်လေးလေ့လာမှုများကြောင့်ကိုကင်းမှီခို Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျော့ချရေးကိုကိုယ်စားပြုထားတဲ့ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်လှုံ့ဆော်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလျှော့ချ [11C] raclopride ရွှေ့ပြောင်းခံရ, နှင့်ဆက်စပ်သည်ကိုပြသခဲ့ကြသည်။ ပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများလည်းကင်းအလွဲသုံးစားမှုနှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသ [18F] DOPA လွှာမှနှင့် Pre-Synaptic dopamine စတိုးဆိုင်၏အစီအမံ (ဝူ et al ပေးရာ striatal vesicular monoamine Transporter2binding, ယုတ်လျော့။ , 1997; Narendran et al ။ , 2012).
လှုံ့ဆော်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှော့ချရေးအပြင်, PET ပုံရိပ်ကိုလည်း (မည်သည့်လှုံ့ဆော်အုပ်ချုပ်ရေးမပါဘဲ) အခနျးခရြာအခြေအနေ dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုကင်းမှီခိုအတွက်လျှော့ချဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤသည်ရှေ့တော်၌ထို D2 receptors imaging နှင့် endogenous dopamine ၏စူးရှသောလျော့ကျပြီးနောက် alpha-methyl-မသန်စွမ်း-tyrosine (AMPT) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေနေသည်။ ထို့ကြောင့် Martinez et al လှုံ့ဆော်အုပ်ချုပ်ရေး (အပြီးမြင်ပြီကျဆင်းခြင်းမှဆန့်ကျင်အဖြစ် [11C] binding raclopride တစ်ခုတိုးလာအတွက် AMPT အုပ်ချုပ်ရေးရလဒ်များကိုပြီးနောက်ပုံရိပ်။ , 2009a) ။ AMPT အုပ်ချုပ်ရေးအယ်လ် Martinez et ([11.1C] ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများအတွက် striatum အတွက် binding raclopride, ဒါပေမယ့်ကင်း-မှီခိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်သာ 4.4 ± 11% အတွက် 5.7 ± 5.9% တစ်ခုတိုးခဲ့သည်။ , 2009a), Basal dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင်လျော့နည်းသွားသည်ဟုညွှန်ပြ။
အတူတူယူကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတသမတ်တည်း Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရေး (Volkow et al လျော့နည်းသွားအဖြစ်တိုင်းတာကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ striatal dopamine ဂီယာတစ်လျှော့ချရေး, ပြသ။ , 1997; Malison et al ။ , 1999; Martinez et al ။ , 2007b, 2011) နှင့် endogenous dopamine ၏အခြေခံအဆင့်ဆင့် (Martinez et al လျှော့ချ။ , 2009a) ။ အလားတူတွေ့ရှိချက် (ကြွက်များတွင် Parsons et al ပြခဲ့ကြ။ , 1991; Robertson က et al ။ , 1991; Rossetti et al ။ , 1992; Weiss et al ။ , 1992; ဂဲ et al ။ , 2002) နှင့် Non-လူ့မျောက်ဝံများ (Castner et al ။ , 2000; Kirkland ဟင်နရီ et al ။ , 2009) ။ ထို့ကြောင့်ကင်းမှီခိုအယ်လ် Melis et (စွဲလမ်းနှင့် relapse အထောက်အကူပြုကြောင်းအပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်သော hypodopaminergic ပြည်နယ်, နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ , 2005) ။ အရေးကြီးတာက, အပေတုံး dopamine လွှတ်ပေးရန် dopamine အချက်ပြအပေါ်ကိုကင်းများ၏စူးရှသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှောင်ရှားရန်, abstinence ၏အကြောင်းကို2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ရရှိသော, ဤအချိန် point ရဲ့လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုကြောင့်ခဲ့ကြသည်ဖေါ်ပြခြင်းစိစစ်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ abstinence ၏2ရက်သတ္တပတ်အောင်မြင်ရန်နိုင်သူကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးမရ (Bisaga et al ပြုပါတဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပိုကောင်းတဲ့ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုရှိသည်သောပြသကြ။ , 2010; Oliveto et al ။ , 2012).
ကင်းအလွဲသုံးမှုအတွက် Hypodopaminergic ပြည်နယ်၏အရေးပါမှု
စွဲလမ်းအပေါ် dopamine ဂီယာ၏သက်ရောက်မှုသည်ဆယ်စုနှစ်များစွာသရုပ်ပြခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြန်ဖြေအတွက်၎င်း၏အမှန်တကယ်အခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးငြင်းခုံအောက်မှာနေဆဲဖြစ်သည်။ dopamine အာရုံခံအကျိုးကို၏လက်ခံရရှိမှုမှတုန့်ပြန်ပစ်ခတ်ခြင်း, အကျိုးကို၏မြော်လင့်စဉ်အတွင်းပေမယ့် Dopamine, သာ signal ကို "ဆုလာဘ်" (မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်သဘာဝကဆုလာဘ်) မှပေါ်လာပါဘူး။ သို့သျောလညျးကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အချက်ပြ dopamine, (Schultz ကသဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု mediates နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲခံရဖို့အကျိုးကိုပိုမိုရရှိရန်လိုအပ်သောအပြုအမူစေသည် 2006; Berridge, 2007; ပညာရှိ 2008; Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2012) ။ သို့သျောလညျးကိုကင်းမှီခိုအတွက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတသမတ်တည်းဒီရောဂါဟာ hypodopaminergic ပြည်နယ်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ, Pre-Synaptic dopamine ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါလျှော့ချကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်ပင်အချိန်ကြာမြင့်စွာမူးယစ်အခမဲ့ကာလပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာခြင်းနှင့်ဆည်းပူးနေအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ (Melis et al ။ , 2005).
လူ့ကင်းချိုးဖောက်အဆိုပါပုံရိပ်လေ့လာမှုများတုံး dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုတစ်ခုတိုး (Martinez et al နှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကွောငျးဖျောပွ။ , 2007b, 2011) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေΔBPNDအဖြစ်တိုင်းတာ, ကင်းချိုးဖောက်ကြောင်းအနိမ့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြယှဉ်ပြိုင် Non-မူးယစ်ဆေးစစ်ကူ၏ရှေ့တော်၌ကင်းယူဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အမူအကျင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အနိမ့် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဆုလာဘ်၏အခြားရွေးချယ်စရာသတင်းရင်းမြစ်တုံ့ပြန်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည် Non-မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလျော့နည်းသွားအကျိုးစီးပွားအတွက်စွဲရလဒ်များကိုအတွက် dopamine function ကိုယုတ်လျော့ခြင်းနှင့်ရှေးခယျြမှု၏မူးယစ် (Melis et al မှလွယ်ကူစွာထိခိုက်တိုးပွားလာသောသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီသည်။ , 2005).
ဒီလေ့လာမှုတွေကို pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဒီကျဆင်းခြင်းနောက်ကွယ်မှယန္တရားနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းမြှင့်။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်ယခင်လေ့လာမှုများ ventral tegmental ဧရိယာ (Brody နဲ့ Dunwiddie ၏ dopamine အာရုံခံ၏လျှော့ချပေါကျကှဲပစ်ခတ်ရန်အတွက်ကင်းထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုပြခဲ့ကြ 1990; Lacey et al ။ , 1990; Ackerman နှင့်အဖြူရောင်, 1992; Gao et al ။ , 1998) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းကင်းဆုတ်ခွာ (Parsons et al အောက်ပါအစီရင်ခံခဲ့ကြအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ , 1991; Robertson က et al ။ , 1991; Rossetti et al ။ , 1992; Weiss et al ။ , 1992) ။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်း midbrain (Gao et al ၏ D2 autoreceptors ၏ sensitivity ကိုပြောင်းလဲပစ်မှပြသလျက်ရှိသည်။ , 1998; Lee က et al ။ , 1999; Marinelli et al ။ , 2003), Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုလျှော့ချနိုင်ပါ။ dopamine အချက်ပြတွင်ဤအလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများအပြင်, တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများလည်းကင်းထိတွေ့ dopamine အာရုံခံအတွက် morphological အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကား dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်နှင့် Melis et အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာ (အယ်လ်၏ dopamine အာရုံခံ၏အရွယ်အစားအတွက်လျှော့ချရေးမြားတှငျပွောငျးလဲပါဝင်သည်။ , 2005).
လက်ရှိတွင်ဤအပြောင်းအလဲများကိုလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိမသိရသည်။ အဆိုပါ dopamine အာရုံခံ (Fusar-Poly နှင့် Meyer-Lindenberg ၏သမာဓိများအတွက်အမှတ်အသားအဖြစ်ထမ်းဆောင်နိုင်သော dopamine Transporter (DAT) ၏လူ့လေ့လာမှုများ, 2013), အ DAT ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံး Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများ (Little က et al အတွက်တိုးပွားလာကြောင်းကိုပြသ။ , 1993, 1999) ။ သို့သော်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ DAT ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း၏ချုပ်ရာအောက်ပါတိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွက်တိုးလာပေမယ့်မကြာမီအယ်လ် Volkow et (ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ဆင့်သို့ပြန်လာကြောင်း။ , ပြသ 1996; ဝမ် et al ။ , 1997; Malison et al ။ , 1998) ။ သို့သော် DAT တစ်ဦးတည်းကိုစညျးတိုင်းတာခြင်းဟာ dopamine အာရုံခံ၏ morphological ပွောငျးလဲထုတ်ဖေါ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပြီး, လူသားများတွင်ပုံရိပ်နှင့်အတူဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်အခြားနည်းဖြင့်မရရှိသေးမရှိကြပေ။ အဆိုပါ midbrain အတွက် dopamine receptors မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ကိုကင်းချိုးဖောက်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်အခြားတလေ့လာမှု D3 အဲဒီ receptor binding ကွောငျးဖျောပွခဲ့ထိန်းချုပ်မှု (Matuskey et al နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) တွင်တိုးမြှင်ဖြစ်ပါတယ်။ , 2011; Boileau et al ။ , 2012) ။ တစ်ဦး autoreceptor အဖြစ် dopamine ဂီယာနှင့်၎င်း၏ function ကို၏မော်ဂျူအတွက် D3 အဲဒီ receptor ၏တိကျသောအခန်းကဏ္ဍနေဆဲအလွန်အမင်း (Sokoloff et al အခြေအတင်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ , 2006) ။ သို့သော်ပြန်လည်သုံးသပ်, စုစုပေါင်းနှင့် Drescher များအတွက် (dopamine ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိပြောင်းလဲပစ်၌ဤအဲဒီ receptor ၏ဖြစ်နိုင်သောဆိုလိုစဉ်းစား, 2012), SN / VTA အတွက် D3 အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးလာစွဲလေ့လာသည့် hypodopaminergic ပြည်နယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။
အဆိုပါ dopamine အာရုံခံသူတို့ကိုယ်သူတို့မြားတှငျပွောငျးလဲအပြင်, အခြား neurotransmitter စနစ်များ dopamine စနစ်ကထိန်းညှိစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများယခင်ကပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြရသော dopamine နဲ့ striatal အာရုံခံဖို့ glutamatergic, GABAergic, serotoninergic, ဒါမှမဟုတ် noradrenergic afferents, (Melis et al ပါဝင်သည်။ , 2005; Gerfen နှင့် Surmeier, 2011) ။ လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကနေသက်သေအထောက်အထားများကိုကင်းထိတွေ့မှုသိသိသာသာ upregulates ကြောင်းပြ dopamine ဂီယာ modulate သော neurotransmitters အကြား (1): ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ကိုအောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တစ်အလားအလာ modulator တွေကိုအဖြစ် Kappa / dynorphin system ပေါ်တွင်အာရုံစူးစိုက် (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Wee နှင့် Koob တွေ့မြင်အချက်ပြ Kappa / dynorphin, 2010; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013); (2) ကို striatum အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အချက်ပြ dynorphin dopamine အချက်ပြနှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှု Kappa စနစ်၏ activation Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရေး (Koob နှင့် Le Moal, လျော့နည်းစေကြောင်းပြသထိန်းညှိ 2008; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013) ။ ထို့ကြောင့် Kappa အဲဒီ receptor မှာမြင့်မားသော striatal dynorphin လှုပ်ရှားမှု, psychostimulant-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေး (Koob နှင့် Le Moal ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်တဲ့အစားထိုးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်နိုင် 2008; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013).
Dynorphin နှင့် Kappa receptor
Kappa အဲဒီ receptor / dynorphin အချက်ပြ
Dynorphin (DYN) ကို Kappa အဲဒီ receptor အဘို့အမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ရှိသည်သော dynorphin A နှင့် B (နှင့်အခြားသူများကို) (KOR) (Chen က et al ပါဝင်သည်ထားတဲ့ prodynorphin ထံမှမှီဝဲ peptides ၏အတန်းဖြစ်ပါသည်။ , 2007) ။ လောလောဆယ်တစ်ဦးတည်းသာ KOR မျိုးကွဲ (1 ရိုက်ထည့်) ပုံတူမျိုးပွားပြီနှင့်အမျိုးအစားများ2နှင့်3တွေးဆခဲ့ကြစဉ်, သူတို့က (အပြည့်အဝသွင်ပြင်လက္ခဏာခံရဖို့သေး Shippenberg et al ရှိသည်။ , 2007) ။ KOR ရွေးချယ် agonists နှင့်ရန်အတွက် DYN / KOR စနစ်၏ neurochemical နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုသို့စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြု, မကြာသေးမီနှစ်များတွင်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ KOR agonists အဆိုပါ arylacetamides ပါဝင်သည် U69593 နှင့် U50488နှင့် A, စက်ရုံမှာတွေ့ရှိတဲ့သဘာဝဖြစ်ပေါ် alkaloid salvinorin Salvia divinorum (Von Voigtlander နှင့် Lewis က, 1982; Lahti et al ။ , 1985; Roth et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါရွေးချယ် KOR ရန်မဟုတ်သလို-binaltorphimine (မဟုတ်သလို-BNI), 5'-guanidinonaltrindole (GNTI), နှင့် JDTic (Endoh et al ။ ပါဝင်သည်, 1992; ဂျုံးစ်နှင့် Portoghese, 2000; ကာရိုး et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ KOR ၏ activation လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဆန္ဒရှိသည်နှင့်အ KOR agonists ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိရိစ္ဆာန်များ (Mucha နှင့် Herz အားဖြင့်မဟုတ်, 1985; တန်နှင့် Collins က, 1985; Pfeiffer et al ။ , 1986; Bals-Kubik et al ။ , 1993; Walsh et al ။ , 2001; Wadenberg, 2003), တူပေမယ့်အချို့လူသားကဆိုပါတယ်မရနိုင်ပါ။
KOR အချက်ပြရှုပ်ထွေးသည်နှင့် agonists ကိုသက်ဝင်ပြပြီ, တားစီးနှင့် / သို့မဟုတ်မြစ်အောက်ပိုင်းအချက်ပြ (ဆိုလိုသည်မှာစခန်း, IP3 / DAG နှင့် Ca မအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ2+) စမ်းသပ်အခြေအနေများ (Tejeda et al ပေါ် မူတည်. ။ , 2012) ။ ဒါဟာ KOR agonists ပြောင်းပြန်လှန်ပြသကြောင်းဖွယ်ရှိသည် Uဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ဦးစလုံး inhibitory Gβγစုဆောင်းဖို့ KOR နိုင်စွမ်း, Gα၏ -shape သက်ရောက်မှု,i, Gαo, Gαzနှင့်Gα16နှင့် stimulatory, GαsG-ပရိုတိန်း (ဥပဒေ et al ။ , 2000; Tejeda et al ။ , 2012) ။ Nanomolar ligand ပြင်းအား inhibitory, G-ပရိုတိန်း၏စုဆောင်းမှုနှင့် K ၏ဆွကနေတစ်ဆင့်တစ်ဦးအမြှေးပါးစိတ်လှုပ်ရှားအတွက်ကျဆင်းခြင်းအဖြစ် transmitter ကိုဖြန့်ချိမှု+-channel လှုပ်ရှားမှု (Grudt နှင့်ဝီလျံ, 1993) နှင့် Ca ၏တားစီး2+-channel နှင့် Pre-Synaptic လွှတ်ပေးရန်စက်ပစ္စည်းလှုပ်ရှားမှု (စုစုပေါင်း et al ။ , 1990; Iremonger နှင့် Bain, 2009) ။ ဆနျ့ကငျြ, Sub-nanomolar ligand ပြင်းအားGαsမှ KOR ၏နားချင်းဆက်မှီမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ (Crain နဲ့ Shen, ထုတ်လုပ်ရန်စေခြင်းငှါ 1996; Tejeda et al ။ , 2012) ။ ဒါဟာ KOR လှုပ်ရှားမှုအပြန်အလှန် (Jackisch et al အချက်ပြခြင်းဖြင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် D2 autoreceptor-မှီခိုကျဆင်းခြင်း modulate နိုင်သည်ကိုသတိပြုသင့်ပါတယ်။ , 1994; Acri et al ။ , 2001; Fuentealba et al ။ , 2006).
အဆိုပါ striatum ၏တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအတွက် Kappa အဲဒီ receptor / dynorphin
အဆိုပါအလတ်စား spiny အာရုံခံ (MSNs), သူတို့စီမံကိန်းက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်သူတို့ (Gerfen ဖော်ပြသည့်ပရိုတိန်းသည်နှင့်အညီကအနည်းဆုံးနှစ်ခုလူမျိုးခွဲများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် 2000; Gerfen နှင့် Surmeier, 2011) ။ ပြန် substantia nigra ၏ dopamine အာရုံခံဆဲလျဆဲလ်အလောင်းတွေဖို့ medial globus pallidus မှ monosynaptically ပရောဂျက်နှင့် MSNs ၏ဖွင့်ကိုဖန်ဆင်းသည် "တိုက်ရိုက်" သို့မဟုတ် striatonigral လမ်းကြောင်း။ တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းကနေ MSNs အဆိုပါ dopaminergic D1 အဲဒီ receptor, M4 muscarinic acetylcholine အဲဒီ receptor, ပစ္စည်းဥစ္စာ P ကိုနှင့် dynorphin ဖော်ပြ။ အဆိုပါသွယ်ဝိုက် striatopallidal လမ်းကြောင်းဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် globus pallidus နှင့် subthalamic နျူကလိယမှတဆင့် Synaptic relays များမှတဆင့် substantia nigra ရောက်ရှိသောနှစ်ဦးနှစ်ဖက် globus pallidus မှပရောဂျက်တစ်ခုကို MSNs ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ ဤရွေ့ကား MSNs adenosine receptors နှင့် enkephalin, အ dopaminergic D2 အဲဒီ receptor ဖော်ပြ။ ဒါဟာ MSNs ဤနှစ်ခုလူဦးရေရဲ့အသားအရောင်ခွဲခြားအဆိုပါ dorsal striatum ၌တည်ထားပြီးကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများလေ့လာမှုများ NAc အတွက် MSNs တစ် subpopulation ပူးတွဲအမြန် D1 နှင့် D2 receptors (ဂျော့ခ်ျနှင့် O'Dowd, ဟန်ကြောင်းကိုပြသ 2007; Valjent et al ။ , 2009) ။ ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ် Dopamine အသီးသီး D1 အဲဒီ receptor နှင့် D2 အဲဒီ receptor မှတဆင့်သိသိ amp-မှီခိုအချက်ပြကိုသက်ဝင်သို့မဟုတ်တားစီးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, dopamine D1- အပေါ် differential ကိုသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ဖွယ်ရှိသည်နှင့် D2-ဖော်ပြ MSNs နှင့်မကြာသေးမီကဒေတာကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး D1-ဖော်ပြအတွက်အချက်ပြလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်, ဒါပေမယ့်တက်ကြွစွာ D2-ဖော်ပြ MSNs (McClung et al ၌သူတို့ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်, အဲဒီအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2004; Bateup et al ။ , 2010), အရာစွဲထဲမှာတိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းများအကြားအချိုးမညီမျှမှုများအတွက်အကောင့်နိုင် (Lobo et al ။ , 2010; Pascoli et al ။ , 2012).
D1 receptors အဆိုပါ stimulatory Gα၏ activation မှတဆင့် adenylyl cyclase စုဆောင်းs အကျိုးဆက်ပရိုတိန်းနှင့် adenosine3'' ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်, ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) ၏ activation မှဦးဆောင်ရသော 5'-monophosphate (Camp) လမ်းကြောင်းအချက်ပြ -dependent ။ ဆနျ့ကငျြ, D2 အဲဒီ receptor inhibitory Gαစုဆောင်းခြင်းဖြင့် adenylyl cyclase နှင့်စခန်း / PKA လမ်းကြောင်းဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်i။ ထို့ကြောင့်ကင်းအဓိကအားဖြင့်ဒီလမ်းကြောင်း၏ D1 အဲဒီ receptor နှင့်ခြယ်လှယ်များ၏ activation မှတဆင့် PKA အချက်ပြလမ်းကြောင်းမြှင့်လုပ်ဆောင် (ကိုကင်းဖို့ Girault အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ, 2012) ။ PKA ၏မြစ်အောက်ပိုင်းပစ်မှတ်တစ်ခုမှာကူးယူအချက် CREB ဖြစ်ပါတယ်။ နျူကလီးယပ်အတွက် CREB ၏ overexpression ကိုကင်းများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများလျော့ကျစေပါတယ် accumbens သော်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကြီးစိုး-အနုတ်လက္ခဏာပုံစံ overexpression Carlezon et al (ကပိုကောင်းစေပါတယ်။ , 1998; Walters နဲ့ Blendy, 2001; McClung နှင့် Nestler, 2008) CREB ၏ activation ကိုကင်းများ၏ postsynaptic သက်ရောက်မှုတန်ပြန်ထို့ကြောင့်ကင်းရန်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုလျော့ကျနိုင်ကြောင်းအကြံပြု။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် CREB နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သည့်မြစ်အောက်ပိုင်းဗီဇတစ်ခုမှာ, dynorphin (McClung နှင့် Nestler ၏ရှေ့ပြေးဗီဇထုတ်ကုန် preprodynorphin encodes 2008) ။ အဆိုပါ Kappa အဲဒီ receptor ၏ activation, ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Wee နှင့် Koob တွေ့မြင် (ကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့ကျ 2010; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013) ။ ထို့ကြောင့်အဆိုပါ D1 အဲဒီ receptor ၏ဆွအဲဒီ receptor ရန် (လျူနှင့် Graybiel အတူပိတ်ဆို့နိုင်သည့် dynorphin စကားရပ်, elevates 1998) ။ ထို့ကွောငျ့, အ D1 / PKA / CREB လမ်းကြောင်း၏ activation (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Wee နှင့် Koob တွေ့မြင်ပေါင်းစပ်နှင့် dynorphin ၏လွှတ်ပေးရန်မှတဆင့်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု counteracting နိုင်အဆိုပြုပြီးပါပြီ 2010; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013), ပုံမှာပြထားတဲ့ Figure22.
အဆိုပါ dynorphin / Kappa စနစ်ကကိုကင်း-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တန်ပြန်နိုင်သောမော်ဒယ်။ ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး dopamine အဆင့်ဆင့် elevates ။ အဆိုပါ striatonigral လမ်းကြောင်း (တိုက်ရိုက်ထံမှအလတ်စား spiny အာရုံခံဖော်ပြ D1 အဲဒီ receptor အပေါ် dopamine ၏ binding ...
Kappa အဲဒီ receptor / dynorphin နှင့် dopamine အချက်ပြ
အဆိုပါ DYN / KOR အဲဒီ receptor system ကို striatal dopamine ဂီယာထိန်းညှိအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပြသလျက်ရှိသည်။ DYN immunoreactive axon D1 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြ MSNs ကနေဆိပ်ကမ်းဟာ caudate ၌တွေ့နေကြတယ်, putamen နှင့်နျူကလိယ accumbens (Hurd နှင့် Herkenham, 1995; ဗန် Bockstaele et al ။ , 1995) ။ အဆိုပါ KOR dopamine အာရုံခံအပေါ်အကျူးနဲ့ post-Synaptic နှစ်ဦးစလုံးထုတ်ဖော်ပြောဆိုလျက်, Pre-Synaptic KOR ဖြစ်ပါတယ်ဒီစနစ်နီးကပ်စွာ Svingos et အဆိုပါ mesoaccumbal dopamine အာရုံခံ (အယ်လ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများညွှန်ပြခြင်း, dopamine axon ဆိပ်ကမ်းအပေါ် DAT မှ apposed ဖြစ်ပါတယ်။ , 2001).
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုအတော်များများဟာ KOR agonist ၏အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (Di Chiara နှင့် Imperato အတွက် striatum နှင့် dopamine အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှုအတွင်း dopamine အဆင့်ဆင့်လျော့ကျစေပါတယ်ကြောင်းပြသကြ 1988; Heijna et al ။ , 1990, 1992; Donzanti et al ။ , 1992; Spanagel et al ။ , 1992; Maisonneuve et al ။ , 1994; ရှီ et al ။ , 1998; Thompson က et al ။ , 2000; Margolis et al ။ , 2003; Zhang က et al ။ , 2004b) ။ တကယ်တော့, KOR activation Basal dopamine အဆင့်ဆင့်အဖြစ်လှုံ့ဆော်-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေး (ကိုကင်း) (Spanagel et al လျော့ကျစေပါတယ်။ , 1990; Maisonneuve et al ။ , 1994; Carlezon et al ။ , 2006; Gehrke et al ။ , 2008) ။ ယင်းနျူကလိယသို့ပြောင်းပြန် Dialysis accumbens Donzanti et al (extracellular dopamine လျော့ကျစေပါတယ်။ , 1992; Zhang က et al ။ , 2004a) ။ အဆိုပါ KOR agonist အဆိုပါ striatum သို့အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါ VTA သို့အုပ်ချုပ်မှုမှီခိုမျိုးစိတ် (Spanagel et al ဖြစ်ပေါ်လာသောသော်လည်းအထူးသ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုမြင်သည်။ , 1992; Chefer et al ။ , 2005; Ford ကား et al ။ , 2006; Margolis et al ။ , 2006).
KOR activation [လျှပ်စစ် evoked တားစီးပြခဲ့ပြီး3နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် H ကို] dopamine လွှတ်ပေးရေး (Heijna et al ။ , 1992; Yokoo et al ။ , 1992), အရာကိုလည်းဒီအဲဒီ receptor ၏ activation striatal dopamine ဂီယာလျော့နည်းစေကြောင်းပြသထားတယ်။ မကြာသေးမီက Chefer et al ။ (2005) KOR ၏ဖျက်မှု Basal dopamine လွှတ်ပေးရေးတခုတိုးမြှင့်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ တနည်းအား KOR ရန် Maisonneuve et al (ထို striatum အတွက် dopamine များလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ , 1994; သငျသညျ et al ။ , 1999; Beardsley et al ။ , 2005) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ KOR agonist အုပ်ချုပ်ရေး striatal D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (Izenwasser et al လျော့ကျစေပါတယ်ထပ်ခါတလဲလဲ။ , 1998) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် DYN / KOR အချက်ပြသည့် striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ (Bruijnzeel, ကျော် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပြုပြင်ကြောင်းပြသ 2009; Wee နှင့် Koob, 2010) နှင့်အလွန်အကျွံ KOR activation သိသိသာသာ dopamine ဂီယာတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသောနည်းလမ်း၏လွတ်လပ်သော, striatal dopamine ဂီယာလျော့နည်းစေကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အထူးသ, ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုကင်းမှီခိုအပြင်, အလွဲသုံးစားမှု၏အခြားတ္ထုများမှစွဲလည်းပေနှင့်အတူတိုင်းတာတုံး Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ရလဒ်များ, ဖော်ပြသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း Martinez et al (အရက်၏လေ့လာမှုများ, စိတ်ကြွဆေး, opiate နှင့်ဆေးရွက်ကြီးမှီခိုအစီရင်ခံခဲ့သည်။ , 2007a, 2012; Busto et al ။ , 2009; ဝမ် et al ။ , 2012) ။ အချို့လေ့လာမှုများ DYN / KOR system အဖြစ်ကောင်းစွာသည်ဤရောဂါအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းပြသကြပေမယ့် (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Wee နှင့် Koob တွေ့မြင် 2010; Koob, 2013), KOR နှင့် DYN အပေါ်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းရှင်းပါတယ်နှင့်ပင်စိတ်ကြွဆေးနှင့် opiate မှီခို (Drakenberg et al အတွက်ချ-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ , 2006; Frankel et al ။ , 2007) ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများကဤပုံမမှန်အတွက်အချက်ပြသည့် DYN / KOR စနစ်နှင့် dopamine အကြားအပြန်အလှန်ရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
ကင်းအလွဲသုံးမှုအတွက် Kappa receptor / Dynorphin စနစ်
သုံး Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအတွက် binding KOR စုံစမ်းစစ်ဆေးဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ Hurd နှင့် Herkenham (နေဖြင့်ဤ၏ပထမဦးဆုံး1993), ဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် putamen သို့မဟုတ် ventral striatum အဆိုပါ caudate အတွက် binding KOR အတွက်နှစ်ဆတိုးမြှင့်ပြသပေမယ့်မ။ mash နှင့် Staley (1999) အသုံးပြုခံ့ စသည်တို့အတွက် autoradiography နှင့် ligand ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးဦးနှောက်ထဲမှာ KOR map မှ binding နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ် anterior အတွက်နှစ်ဆတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် caudate နှင့် putamen ၏ ventral ကဏ္ဍများနှင့်နျူကလိယ accumbens ပြသခဲ့သည်။ အလားတူရလာဒ်များ Staley et al အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။ (1997) သူ KOR တိုင်းတာရန် radiolabeling အသုံးပြုသောနှင့်ဦးနှောက်တစ်သျှူးကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါထိတွေ့ကင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောယင်း caudate အတွက် KOR အတွက်တိုး, putamen နှင့်နျူကလိယ accumbens သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခိုအဆိုပါ striatum အတွက် KOR တစ်သိသိသာသာ upregulation နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ယနေ့အထိမရှိလူ့ Vivo အတွက် အဆိုပါ KOR ၏ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုများတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ယခင်ပေလေ့လာမှုများကိုကင်းမှီခို (Zubieta et al အတွက် mu opioid အဲဒီ receptor imaged နေစဉ်။ , 1996; Gorelick et al ။ , 2008), အ KOR ၏ပေပုံရိပ်ကြောင့်သင့်လျော်တဲ့ radiotracer ၏မရှိခြင်းယခင်ကဖြစ်နိုင်သောမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်, ထိုကဲ့သို့သောကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအဖြစ်လက်တွေ့ရလဒ်များနှင့်အတူဆက်စပ်လုပ်ဆောင်လို့မရပါ။ က KOR အချက်ပြအတွင်းတိုးအကြီးအကျယ်ပေပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်ပြ dopamine အတွက်လျော့ချရေးနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ရှိမရှိမသိရသေးနိုင်အောင်ထို့အပြင်ဤ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုများ, (ထိုကဲ့သို့သောအဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆသို့မဟုတ် dopamine အဆင့်ဆင့်ကဲ့သို့) dopamine ဂီယာ၏အမှတ်အသားများကိုတိုင်းတာမရခဲ့ပေ။ KOR နှစ်ဦးစလုံးတိုင်းအတူတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် binding နှင့် dopamine ဂီယာ KOR အသစ် radiotracers ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုတစ်ဦးကအရေအတွက်အားကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေး mRNA နှင့် preprodynorphin mRNA prodynorphin, DYN ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးထပ်ခါတလဲလဲကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ ကနဦးလေ့လာမှုများ peptide အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာနှင့်ကိုကင်းများ၏နာတာရှည်ထိုး, (40-100% အားဖြင့် Sivam striatal dynorphin အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ 1989; အပြုံးပုံ et al ။ , 1990) ။ အစား peptide အဆင့်ဆင့်၏ prodynorphin နှင့် preprodynorphin mRNA တိုင်းတာခြင်းထပ်မံလေ့လာမှုများ, ဤတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူပါပြီ။ Daunais et al ။ (Daunais et al ။ , 1993, 1995; Daunais နှင့် McGinty, 1995, 1996) ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင် 100% ထက် ပို. အားဖြင့် caudate / putamen အတွက် mRNA preprodynorphin ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကိုကင်းများ၏အုပ်ချုပ်မှုကြွက်နှင့်ကြွက်များ၏ caudate / putamen (Yuferov et al အတွက် mRNA အဆင့်ဆင့် 50-100% preprodynorphin တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ပြီးရှိရာအလားတူရလာဒ်များအပြင်အခြားအုပ်စုများအားဖြင့်လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခဲ့ကြ။ , 2001; zhou et al ။ , 2002; Jenab et al ။ , 2003; Schlussman et al ။ , 2003, 2005; Zhang က et al ။ , 2013) ။ Spangler et al ။ (1993, 1996) ကိုကင်း 40% အားဖြင့် caudate / putamen အတွက် mRNA prodynorphin တိုးလာ, ဤအဆင့်ဆင့်နေ့ရက်ကာလအဘို့မွငျ့မားကျန်ရစ်ကြောင်းကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားကြွက်များတွင်အထက်ပါလေ့လာမှုများတသမတ်တည်းကင်းအုပ်ချုပ်ရေး DYN, prodynorphin တိုးပွါးကြောင်းသတင်းပို့နှင့်% 40 အကြောင်း 100 ကနေအထိအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ mRNA preprodynorphin ။ ယခင်လေ့လာမှုများ DYN peptide ၏အဆင့်ဆင့်နှင့် prodynorphin / mRNAs mRNAs အတွက်တိုးအနီးကပ် peptide သူ့ဟာသူအတွက်တိုး (Li က et al ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြု, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ပတျသကျ preprodynorphin ကြောင်းပြသကြ။ , 1988; Sivam, 1996).
ကြွက်များတွင်ဤတွေ့ရှိချက်မျောက်တွေကိုနှင့်လူသား၏လေ့လာမှုများအတွက်ပုံတူကူးယူခဲ့ပါပြီ။ Fagergren et al ။ (2003) အဘယ်သူသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကိုကင်းမျောက်တွေကိုအတွက်လေ့လာမှုဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် prodynorphin mRNA အဆင့်ဆင့်ဟာ dorsolateral caudate (83%), ဗဟို caudate (34%), နှင့် dorsal putamen (194%) တိုးကြသည်ဟုပြသသည်။ လူသားမြားသညျတှငျ, Hurd နှင့် Herkenham (1993) ပထမဦးဆုံးကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအလွဲသုံးစားလုပ်ကင်းတဲ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုအတွက် putamen နှင့် caudate အတွက် mRNA preprodynorphin တစ်ခုတိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက Frankel et al ။ (2008) ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးတဲ့ Post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာလေ့လာမှုမှာ DYN peptide အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာနှင့်ဘာသာရပ်များကိုထိန်းချုပ်ထား, နှင့် caudate အတွက် DYN အတွက်သိသိသာသာတိုးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ putamen အတွက်သိသိသာသာတိုးဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားများပြားလာ ventral pallidum တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကွာခြားချက် thalamus, တိုကျရိုကျ, ယာယီ, parietal နှင့် occipital cortical တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများကိုကင်းထိတွေ့ကြွက်, Non-လူ့မျောက်ဝံများနှင့်လူမှာ Kappa အဲဒီ receptor မှာ striatal DYN အချက်ပြတိုးပွါးကြောင်းဖော်ပြသည်။ dopamine အချက်ပြအပေါ် DYN ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းကြောင့်ကိုကင်းထိတွေ့မှုအားဖြင့် DYN အဆင့်ဆင့်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးကင်းချိုးဖောက်ဖော်ပြထားတဲ့ hypodopaminergic ပြည်နယ်မှပါဝင်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။
လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်ဤတွေ့ရှိချက် KOR အချက်ပြပစ်မှတ်ထားကြောင်းကုသမှုကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ modulate မယ်လို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သျောလညျးကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် KOR agonist သို့မဟုတ်ရန်အုပ်ချုပ်ရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှာဖွေစူးစမ်းတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများရောစပ်ကြသည် (ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့, Wee နှင့် Koob တွေ့မြင်, 2010; Butelman et al ။ , 2012) ။ KOR / DYN ပြောင်းလဲမှုများနှေးစတင်ခြင်း (Wee et al ရှိစဉ်ကတည်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု, အသုံးပြုတဲ့အားဖြည့်အချိန်ဇယားအပေါ်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအချိန်ကိုက်၏ဆေးများမူတည်ပါတယ်။ , 2009; Knoll et al ။ , 2011) ။ ထို့အပြင် DYN / KOR စနစ်ကကိုကင်းထိတွေ့မှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောဆန္ဒရှိသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေအတွက်ပိုပြီးသိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာသည်။
Kappa အဲဒီ receptor / dynorphin နှင့်အလေးပေး-သွေးဆောင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ KOR activation နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ DYN Shirayama et ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆိုပါ striatum အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု, amygdala နှင့် hippocampus (အယ်လ်တုံ့ပြန်ဖြန့်ချိသည်။ , 2004; မြေယာ et al ။ , 2008), နှင့် KOR ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးကျိုးများလျော့နည်းစေသည်။ McLaughlin et al ။ (2003) နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လူမှုရေးရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုကြွက်တွေမှာကင်းအဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို (CPP က) မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီအကြိုးသကျရော KOR ရန်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်နှင့် prodynorphin ခေါက်ထွက်ကြွက် (McLaughlin et al အတွက်မမွငျခဲ့သညျ။ , 2003, 2006) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကြိုတင်ကင်းအေးစက်တစ် KOR agonist ၏အုပ်ချုပ်မှုနောက်ဆက်တွဲကင်း-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (McLaughlin et al potentiating အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်ထိရောက်သောဖြစ်ပြခံခဲ့ရသည်။ , 2006) ။ Beardsley et al ။ (2005) လီဗာကိုကင်းဘို့ကိုနှိပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်မထိန်းချုပ် footshock အောက်ပါကြွက်များတွင်ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းကြောင်းနှင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု JDTic တစ် KOR ရန်၏အုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း။ ဤအတူညီလိုင်းများ, Redila နှင့် Chavkin (တစ်လျှောက်2008) ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းခြေလျင်ထိတ်လန့်, အတင်းအကျပ်ရေကူးနှင့် KOR agonist အုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးကြွက်တွေမှာကင်း CPP ကပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု KOR ရန်မဟုတ်သလို-BNI နှင့်အတူ Pre-ကုသမှုနှင့်အတူပိတ်ဆို့ခဲ့သည်, ထို KOR သို့မဟုတ် prodynorphin ဖြစ်စေချို့တဲ့ကြွက်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ကယ်ရီ et al ။ (2007) ကိုလည်း KOR ရန်နှင့်အတူ Pre-ကုသမှုကိုကင်းချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ပိတ်ဆို့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဤရွေ့ကားလေ့လာမှုများ KOR မှာအချက်ပြစိတ်ဖိစီးမှုအောက်ပါကင်း-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ မကြာမီကလေ့လာမှုများလည်းကင်း၏အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်သက်ရောက်မှု (Koob et al တိုးမြှင့်ဖို့အတူတကွ DYN အချက်ပြခြင်းနှင့် corticotropin အချက်လွှတ်ကြောင်း (CRF) function ကိုပြသကြ။ , 2004) ။ မြေယာ et al ။ (2008) KOR ၏ activated ပုံစံများအတွက် phospho-ရွေးချယ် antibody ကိုအသုံးပြုသောနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးနှင့် CRF အုပ်ချုပ်ရေးနှစ်ခုစလုံး KOR ၏ DYN-မှီခို activation မှုကြောင့်ပြသသည်။ Valdez et al ။ (2007) မျောက်တွေကို, ကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတစ်ခု KOR agonist ၏အုပ်ချုပ်မှုကနေပြန်လည်ရုတ်သိမ်းကြောင်းကြောင်းပြသ, ဤအကျိုးသက်ရောက်မှု CRF ရန်အုပ်ချုပ်မှုအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း။ KOR agonists နေသောဥ et al (ကြွက်နှင့်လူသားအတွက် HPA ဝင်ရိုးလှုံ့ဆော်ခြင်း။ , 1997; Laorden et al ။ , 2000), နှင့်ကယခင်က KOR activation CRF လွှတ်ပေးရေး (Nikolarakis et al elicits ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ , 1986; သီချင်းနှင့် Takemori, 1992) နှင့်ဒုနျအလှနျ (မြေ et al ။ , 2008).
လူ့ကင်းချိုးဖောက်လေ့လာရေးမှာလည်းစိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ် (de la Garza et al တိုးပွါးကြောင်းပြသကြ။ , 2009) ။ အဆိုပါ hypothalamic pituitary adrenal ဝင်ရိုး၏ pharmacological သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ activation တိုးမြှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း (Elman et al များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအပြင်တဏှာတိုးမြှင့်ပြသလျက်ရှိသည်။ , 2003; Shoptaw et al ။ , 2004; Elman နှင့်လောနိတျမွို့, 2005) ။ Sinha နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် Sinha et al (စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်ကင်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်တဏှာတိုးပွါးကြောင်းပြသကြ။ , 1999, 2006; Fox က et al ။ , 2006) ။ အရေးကြီးတာက, ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်းစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာအတွင်းလူနာကုသမှု (Sinha et al ကနေဆင်းအောက်ပါကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ပြန်သွားကြသည်ဖို့တိုတောင်းအချိန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ , 2006) ။ ယနေ့အထိ, စွဲလမ်းထဲမှာပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မလာကြနှင့်အနာဂတ်သုတေသန dopamine နဲ့ KOR အချက်ပြခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် DYN / KOR အချက်ပြ, မူးယစျဆေးရပ်နားခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးဆည်းပူးနေ (Koob နှင့် Le Moal နှင့်အတူဆက်စပ်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေခြင်းဖြင့်မူးယစ်ရှာကြံအပြုအမူပြန်လည်နေရာချထားအတွက်အရေးပါလှတဲ့ပုံ 2008; Muschamp နှင့် Carlezon, 2013).
ဤနေရာတွင်တင်ပြအဆိုပါဒေတာကိုကင်းမှီခိုအတွက်ပုံရိပ်နှင့်အတူတိုင်းတာတုံး striatal dopamine လွှတ်ပေးရန် DYN တစ်ခု upregulation နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ dopamine ဆိပ်ကမ်း၏ KOR မှာသရုပ်ဆောင်, KOR activation striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းထုတ်လုပ်ရန်မျှော်မှန်းထားမည်ဖြစ်သည်။ post-ရုပ်အလောင်းကိုခွဲစိတ်စစ်ဆေးရာကင်းချိုးဖောက်လေ့လာမှုများနှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ KOR နှင့် DYN နှစ်ဦးစလုံးနာတာရှည်ကင်းထိတွေ့အောက်ပါ upregulated ဖြစ်ကြောင်းပြသနှင့်သောဤအကျိုးသက်ရောက်တာရှည် (Spangler et al တည်တံ့သည်။ 1993, 1996) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကိုကင်းချိုးဖောက်သည့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ KOR ၏ activation ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးပွါးကြောင်းကိုပြသနေစဉ်တုံး dopamine လွှတ်ပေးရန် relapse တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ သို့သော်လေ့လာမှုများ KOR နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းလူ့ကင်းချိုးဖောက်အချက်ပြ striatal dopamine တိုင်းတာခြင်းကောက်ယူကြပြီမဟုတ်။ ထို့ကြောင့်ကင်းချိုးဖောက်သည့် KOR imaging နှင့် dopamine ဂီယာနှင့်သက်ဆိုင်ရာလက်တွေ့ရလဒ်များနှင့်တိုက်ရိုက်သူတို့ရဲ့အဆင့်ကို correlating အနာဂတ်လေ့လာမှုများ, လိုအပ်ပါသည်။
နာတာရှည်ကင်းထိတွေ့ CREB phosphorylation နှင့်အခြားအချက်များအပြင်မှာရှိတဲ့နျူကလိယ accumbens အတွက် prodynorphin mRNA ၏စကားရပ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသောဗီဇစကားရပ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်သည်။ လူ့ကင်းအလွဲသုံးစားပြုသူများ၏ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှာပြထားပြီးဖြစ်သော extracellular dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလွန်အကျွံ DYN အချက်ပြရလဒ်များကို။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် dopamine receptors မှာအချက်ပြတိုးမြှင့်, သင့်လျော်တဲ့ကုသမှုချဉ်းကပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့် dopamine agonists အသုံးပြု. လက်တွေ့လေ့လာမှုများ (Amato et al ထိရောက်မှုကိုပြသကြပြီမဟုတ်။ ကြောင်းအကြံပြု 2011) ။ ထို့ကြောင့် endogenous dopamine တိုးမြှင့်ကြောင်း pharmacologic ထိန်းသိမ်းရေးပုံရိပ်လေ့လာမှုများနဂိုအတိုင်း dopamine အချက်ပြနေတဲ့အပြုသဘောကုသမှုတုံ့ပြန်မှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကြောင်းပြသအထူးသဖြင့်ကတည်းကအသုံးပြုမှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာပြန်လည်သုံးသပ်အဆိုပါဒေတာ KOR ရန် DYN upregulation ၏သက်ရောက်မှုတန်ပြန်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုနှင့် Pre-Synaptic dopamine လွှတ်ပေးရန် restore စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, KOR ရန်အလွန်ကန့်သတ်ရှိသည်, ဆိုမိလျှင်, ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး (Kreek et al ။ , 2012) နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပိတ်ဆို့။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက် KOR ရန်ကိုကင်းစွဲ (Muschamp နှင့် Carlezon များအတွက်အနာဂတ်ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသော Avenue ပေးစေခြင်းငှါအကြံပြု, 2013).
Abi-Dargham အေ, Simpson N. , Kegeles L. , Parsey R. , Hwang DR, Anjilvel S. (1999) ။ endogenous dopamine နှင့် D1 radiotracer [11C] NNC 756. Synapse 32, 93-10910.1002 / (SICI) 1098-2396 (199905) 32:2<93 :: AIDSYN3> 3.0.CO အကြားယှဉ်ပြိုင်မှု၏ပေလေ့လာမှုများ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ackerman JM, အဖြူရောင် FJ (1992) ။ ထပ်ခါတလဲလဲကိုကင်းကနေဆုတ်ခွာအောက်ပါကြွက် A10 dopamine အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့သွားသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 218, 171-17310.1016 / 0014-2999 (92) 90161-V ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Acri JB, Thompson က AC၊ Shippenberg T. (2001) ။ အဆိုပါရွေးချယ် kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist U2 နေဖြင့်အကျူးနှင့် Post-synaptic dopamine D69593 အဲဒီ receptor function ကို၏မော်ဂျူ။ Synapse 39, 343-35010.1002 / 1098-2396 (20010315) 39:4<343 :: AIDSYN1018> 3.0.CO; 2-Q [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Amato L. , Minozzi အက်စ်, Pani PP, et al Solimini R. , Vecchi အက်စ်, Zuccaro P. ။ (2011) ။ ကိုကင်းမှီခို၏ကုသမှုများအတွက် Dopamine agonists ။ Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ။ ဗျာ CD003352 ။ [PubMed]
Bals-Kubik R. , Ableitner အေ, Herz အေ, Shippenberg TS (1993) ။ ကြွက်များတွင် conditional ရာအရပျ preference ကိုပါရာဒိုင်းခြင်းဖြင့်တစ်ခုသို့ဆက်စပ်အဖြစ် opioids များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုဖြန်ဖြေ Neuroanatomical ဆိုဒ်များ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 264, 489-495 [PubMed]
Bateup HS, Santini အီး, Shen ဒဗလျူ, Birnbaum အက်စ်, Valjent အီး, Surmeier DJ သမား, et al ။ (2010) ။ အလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ကွဲပြား subclasses differential striatal မော်တာအပြုအမူတွေကိုထိန်းညှိ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 107, 14845-1485010.1073 / pnas.1009874107 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Beardsley pm တွင်, Howard JL, Shelton ဟာ KL, ကာရိုး FI (2005) ။ ကိုကင်း-ရှာကြံကင်း Prime နှင့်ကြွက်များအတွက်၎င်း၏လက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှု vs. footshock ဖိအားများကသွေးဆောင်၏ reinstatement အပေါ်ဝတ္ထု Kappa opioid အဲဒီ receptor ရန်, JDTic ၏ differential ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 183, 118-12610.1007 / s00213-005-0167-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bisaga အေ, Aharonovich အီး, Cheng WY, Levin FR, Mariani JJ, ခွေးရူးပြန်ရောဂါ WN, et al ။ (2010) ။ တစ်ဦး Pre-Randomization ခဲ-In ကာလအတွင်းက high-တန်ဖိုးကိုဘောက်ချာမက်လုံးတွေနဲ့ကင်းမှီခိုဘို့ memantine ၏တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 111, 97-10410.1016 / j.drugalcdep.2010.04.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Boileau ဗြဲ, အခွန်ဆောင်သူဃ, Houle အက်စ်, Behzadi အေ, Rusjan pm တွင်, Tong ဂျေ, et al ။ (2012) ။ တစ်ဦး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု: စိတ်ကြွဆေး polydrug အသုံးပြုသူများသည်အတွက် propyl-hexahydro-naphtho-oxazin - (+) - ထို dopamine D3 အဲဒီ receptor- သာ. နှစ်သက် ligand [11C] မြင့်မားစည်းနှောင်။ ဂျေ neuroscience ။ 32, 1353-135910.1523 / JNEUROSCI.4371-11.2012 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Breier အေ, စု TP, Saunders R. , Carson RE, Kolachana BS, Debartolomeis အေ, et al ။ (1997) ။ Schizophrenia မြင့်မားသောစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် Synaptic dopamine ပြင်းအားနှင့်ဆက်စပ်သည်: တစ်ဝတ္ထု positron ထုတ်လွှတ် tomography နည်းလမ်းကနေသက်သေအထောက်အထား။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 94, 2569-257410.1073 / pnas.94.6.2569 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Brody က MS, Dunwiddie တီဗီ (1990) ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာကိုကင်းသက်ရောက်မှု: လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုသွယ်ဝိုက် dopaminergic ယန္တရားအဘို့သက်သေသာဓက။ Naunyn Schmiedebergs Arch ။ Pharmacol ။ 342, 660-66510.1007 / BF00175709 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bruijnzeel AW (2009) ။ Kappa-Opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြခြင်းနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကို။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 62, 127-14610.1016 / j.brainresrev.2009.09.008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Busto UE, လာခြင်း L. , Mayberg အိပ်ချ်, Kapur အက်စ်, Houle အက်စ်, Zawertailo LA က (2009) ။ စိတ်ဓာတ်ကျဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် Dopaminergic လှုပ်ရှားမှု: တစ် positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ synapses 63, 681-68910.1002 / syn.20646 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Butelman ER, Yuferov V. , Kreek MJ (2012) ။ Kappa-Opioid အဲဒီ receptor / dynorphin စနစ်က: စွဲများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် pharmacotherapeutic ဂယက်ရိုက်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 35, 587-59610.1016 / j.tins.2012.05.005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကယ်ရီ AN, Borozny K. , Aldrich ဖက်စပ်, McLaughlin JP (2007) ။ အဆိုပါ peptide Kappa-opioid အဲဒီ receptor ရန် arodyn နေဖြင့်တားဆီးကင်းရာအရပ်ကို-အေးစက်၏ Reinstatement ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 569, 84-8910.1016 / j.ejphar.2007.05.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carlezon WA, Jr. Beguin C. , Dinieri ဂျာ Baumann MH, Richards MR, Todtenkopf က MS, et al ။ (2006) ။ ကြွက်များတွင်အပြုအမူနှင့် neurochemistry အပေါ်တစ်ဦးက salvinorin အဆိုပါ Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ၏စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 316, 440-44710.1124 / jpet.105.092304 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carlezon WA, Jr. Thome ဂျေ, Olson VG, ယာဉ်ကြော-Ladd SB, Brodkin ES, Hiroi N. , et al ။ (1998) ။ CREB အားဖြင့်ကိုကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ သိပ္ပံ 282, 2272-227510.1126 / science.282.5397.2272 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကာရိုးဗြဲ, သောမတ်စ် JB, Dykstra LA က, Granger AL, Allen က RM, Howard JL, et al ။ (2004) ။ JDTic ၏ Pharmacological ဂုဏ်သတ္တိများ: တစ်ဝတ္ထု Kappa-opioid အဲဒီ receptor ရန်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 501, 111-11910.1016 / j.ejphar.2004.08.028 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Castner လုပ် SA Al-Tikriti က MS, Baldwin RM, Seibyl JP, Innis RB, Goldman-Rakic ​​PS (2000) ။ အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများနှင့် subchronic စိတ်ကြွဆေးနှင့်ထိတွေ့မျောက်တွေကိုအတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရေး [123I] IBZM equilibrium SPECT တိုင်းတာခြင်း။ Neuropsychopharmacology 22, 4-1310.1016 / S0893-133X (99) 00080-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chefer VI ကို, Czyzyk တီ, Bolan EA ၏, Moron ဂျေ, Pintar je, Shippenberg TS (2005) ။ Endogenous Kappa-opioid အဲဒီ receptor စနစ်များကိုကင်းဖို့ mesoaccumbal dopamine ဒိုင်းနမစ်နှင့်အားနည်းချက်ထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 25, 5029-503710.1523 / JNEUROSCI.0854-05.2005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chen က Y. , Chen က C. , လျူ-ချန် Ly (2007) ။ Dynorphin peptides differential လူ့ Kappa opioid အဲဒီ receptor ထိန်းညှိ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 80, 1439-144810.1016 / j.lfs.2007.01.018 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Chou YH, Karlsson P. , Halldin C. , Olsson အိပ်ချ်, Farde L. (1999) ။ အဆိုပါမျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာပြောင်းလဲ endogenous dopamine အဆင့်ဆင့်စဉ်အတွင်း binding dopamine အဲဒီ receptor ligand -like: D (1) ၏တစ်ပေလေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 146, 220-22710.1007 / s002130051110 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Crain သည် SM, Shen KF (1996) ။ opioid analgesia, သည်းခံစိတ်များနှင့်မှီခိုအပေါ် GS-coupled excitatory opioid အဲဒီ receptor လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ Modulatory ဆိုးကျိုးများ။ Neurochem ။ res ။ 21, 1347-135110.1007 / BF02532375 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Czoty PW, မော်ဂန်ဃ, Shannon EE, Gage, HD, Nader, MA (2004) ။ dopamine D1 နှင့်လူမှုရေးအရသျော cynomolgus မျောက် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းအတွက် D2 အဲဒီ receptor function ကို၏စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 174, 381-38810.1007 / s00213-003-1752-z [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dalley JW, Everitt BJ, Robbins TW (2011) ။ Impulse, compulsive နှင့်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး။ အာရုံခံဆဲလျ 69, 680-69410.1016 / j.neuron.2011.01.020 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dalley JW, Fryer TD, Brichard L. , ရော်ဘင်ဆင် ES, Theobald DE, Laane K. , et al ။ (2007) ။ နျူကလိယ D2 /3receptors ရို Impulse နှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်ကြိုတင်ခန့်မှန်း accumbens ။ သိပ္ပံ 315, 1267-127010.1126 / science.1137073 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Daunais JB, McGinty JF (1995) ။ ကိုကင်း Bing differential striatal preprodynorphin နှင့် ZIF / 268 mRNAs ပြောင်းလဲပစ်။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 29, 201-21010.1016 / 0169-328X (94) 00246-B က [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Daunais JB, McGinty JF (1996) ။ အဆိုပါ ZIF / 1 အပေါ် D2 သို့မဟုတ် D268 dopamine အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ရေတိုရေရှည်ကိုကင်းမူးရူးအောက်ပါကြွက် forebrain အတွက်မျိုးဗီဇစကားရပ် preprodynorphin ။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 35, 237-24810.1016 / 0169-328X (95) 00226-ငါ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Daunais JB, ရောဘတ်, DC, McGinty JF (1993) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြွက် striatum အတွက် preprodynorphin, ဒါပေမယ့်မရက c-fos, mRNA တိုးပွားစေပါသည်။ Neuroreport 4, 543-54610.1097 / 00001756-199305000-00020 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Daunais JB, ရောဘတ်, DC, McGinty JF (1995) ။ က Short-term ကိုကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေး striatal ဗီဇစကားရပ်ပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 37, 523-52710.1016 / 0361-9230 (95) 00049-K သည် [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
de La Garza R. , II, Ashbrook LH, အီဗန် SE, Jacobsen, CA, Kalechstein အေဒီနယူတန် TF (2009) ။ Non-ကုသမှုရှာ, ကင်း-စွဲစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ကင်းများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အလိုဆန္ဒအပေါ်တစ်ဦးမကြာသေးမီစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံ၏နှုတ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ နံနက်။ ဂျေစွဲ။ 18, 481-48710.3109 / 10550490903205876 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
di Chiara G. အ, Imperato အေ (1988) ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ dorsal caudate အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် mu နှင့် Kappa opiate agonists ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 244, 1067-1080 [PubMed]
Donzanti BA, Althaus JS, Payson MM, Von Voigtlander PF (1992) ။ dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက် Kappa agonist-သွေးဆောင်လျော့ချရေး: အရေးယူမှုနှင့်သည်းခံစိတ်၏ site ကို။ res ။ Community ။ Chem ။ Pathol ။ Pharmacol ။ 78, 193-210 [PubMed]
Drakenberg K. , Nikoshkov အေ, Horvath MC, Fagergren P. , Gharibyan အေ, Saarelainen K. , et al ။ (2006) ။ ဘိန်းဖြူချိုးဖောက် striatal opioid neuropeptide ဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက် mu opioid အဲဒီ receptor A118G polymorphic ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 103, 7883-788810.1073 / pnas.0600871103 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Drevets WC, Gautier C. , စျေး JC, Kupfer DJ သမား, Kinahan PE, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, et al ။ (2001) ။ လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 49, 81-9610.1016 / S0006-3223 (00) 01038-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Elman ဗြဲ, လောနိတျမွို့ SE (2005) ။ ကိုကင်း-မှီခိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းအတွက်ပလာစမာ prolactin နှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏအပေါ် cortisol နှင့်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 30, 859-86410.1016 / j.addbeh.2004.08.019 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Elman ဗြဲ, လောနိတျမွို့ SE, Karlsgodt KH, Gasic မိသားစုဆရာဝန်, Breiter HC (2003) ။ acute cortisol အုပ်ချုပ်ရေးကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တဏှာအစပျိုးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Psychopharmacol ။ နွားလား။ 37, 84-89 [PubMed]
Endoh တီ, Matsuura အိပ်ချ်, Tanaka C. , Nagase အိပ်ချ် (1992) ။ nor-binaltorphimine: Vivo အတွက်ကြာရှည်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတစ်ဦးအစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ရန်။ Arch ။ int ။ Pharmacodyn ။ Ther ။ 316, 30-42 [PubMed]
Endres CJ, Kolachana BS, Saunders RC, စုတီ, Weinberger ဃ, Breier အေ, et al ။ (1997) ။ [C-11] raclopride ၏ Kinetic မော်ဒယ်: ပေါင်းစပ်ပေ-microdialysis လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Cereb ။ သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 17, 932-94210.1097 / 00004647-199709000-00002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, ဘီးလင်းဃ, Economidou ဃ, Pelloux Y. , Dalley JW, Robbins TW (2008) ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာအလေ့အထများနှင့်စွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့အားနည်းချက်အခြေခံအာရုံကြောယန္တရားများ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ B က Biol ။ သိပ္ပံ။ 363, 3125-313510.1098 / rstb.2008.0089 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fagergren P. , Smith က HR, Daunais JB, Nader, MA, Porrino LJ, Hurd YL (2003) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မျောက် striatum အတွက် prodynorphin mRNA ၏ယာယီ upregulation ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 17, 2212-221810.1046 / j.1460-9568.2003.02636.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Ford ကားက CP, မာကုမိသားစုဆရာဝန်, Williams က JT (2006) ။ Properties ကိုနှင့် mesolimbic dopamine အာရုံခံ၏ opioid တားစီးပစ်မှတ်တည်နေရာအရသိရသည်ခြားနားသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 26, 2788-279710.1523 / JNEUROSCI.4331-05.2006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fox က HC, Garcia ကအမ်, Jr. Kemp K. , Milivojevic V. , Kreek MJ, Sinha R. (2006) ။ ကိုကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုမှနှလုံးသွေးကြောနှင့် corticoadrenal တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 185, 348-35710.1007 / s00213-005-0303-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Frankel PS, Alburges ME, ဘုရ်ှကအယ်လ်, Hanson ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ကိရှ SJ (2007) ။ လူ့နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးအသုံးပြုသူများသည်အတွက် neuropeptides ၏ဦးနှောက်အဆင့်ဆင့်။ Neuropharmacology 53, 447-45410.1016 / j.neuropharm.2007.06.009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Frankel PS, Alburges ME, ဘုရ်ှကအယ်လ်, Hanson ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, ကိရှ SJ (2008) ။ Striatal နှင့် ventral pallidum dynorphin ပြင်းအားသိသိသာသာလူ့နာတာရှည်ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်တိုးမြှင့်နေကြသည်။ Neuropharmacology 55, 41-4610.1016 / j.neuropharm.2008.04.019 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fuentealba ဂျာ Gysling K. , Magendzo K. , Andres ME (2006) ။ အဆိုပါရွေးချယ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ဦး-69593 တိုး၏ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine extracellular အဆင့်ဆင့်နှိုးဆွ။ ဂျေ neuroscience ။ res ။ 84, 450-45910.1002 / jnr.20890 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fusar-Poly P. , Meyer-Lindenberg အေ (2013) ။ schizophrenia အတွက် Striatal presynaptic dopamine, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငါ: dopamine တက်ကြွ Transporter (DAT) သိပ်သည်းဆ၏ Meta-analysis သည်။ Schizophr ။ နွားလား။ 39, 22-3210.1093 / schbul / sbr111 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gao WY, Lee က TH ဘုရင်ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Ellinwood Eh (1998) ။ အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုနှင့် substantia nigra နှင့်ကိုကင်း pretreatment ကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ putative dopamine အာရုံခံအတွက် quinpirole sensitivity ကိုအတွက် ALTER ။ Neuropsychopharmacology 18, 222-23210.1016 / S0893-133X (97) 00132-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gehrke BJ, Chefer VI ကို, Shippenberg TS (2008) ။ ကြွက် dorsal striatum အတွက် dopamine function ကိုအပေါ်တစ်ဦးက salvinorin ၏စူးရှသောနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 197, 509-51710.1007 / s00213-007-1067-6 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျော့ခ်ျ SR, O'Dowd BF (2007) ။ ဦးနှောက်အတွက်ယူနစ်အချက်ပြတစ်ဦးကဝတ္ထု dopamine အဲဒီ receptor: D1 နှင့် D2 dopamine receptors ၏ heterooligomers ။ ScientificWorldJournal 7, 58-6310.1100 / tsw.2007.223 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gerfen CR (2000) ။ striatal-အနာဂတ်လမ်းကြောင်းအပေါ် dopamine ၏မော်လီကျူးဆိုးကျိုးများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 23, S64-S7010.1016 / S1471-1931 (00) 00019-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gerfen CR, Surmeier DJ သမား (2011) ။ dopamine အားဖြင့် striatal projection စနစ်များ Modulation ။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 34, 441-46610.1146 / annurev-neuro-061010-113641 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂဲ MA, Petromilli P. , Westenberg HG, Di Chiara G. အ, ဗန် Ree JM (2002) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် Basal dopamine အဆင့်ဆင့်အတွက်ကျဆင်းခြင်းကြွက်များတွင်နေ့စဉ်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူစဉ်အတွင်း shell ကို accumbens ။ ဦးနှောက် Res ။ 924, 141-15010.1016 / S0006-8993 (01) 03105-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Girault ဂျေအေ (2012) ။ striatal အာရုံခံအတွက်အချက်ပြ: ဆုလာဘ်, စွဲလမ်းနှင့် dyskinesia ၏ phosphoproteins ။ prog ။ Mol ။ Biol ။ ဘာသာပြန်။ သိပ္ပံ။ 106, 33-6210.1016 / B978-0-12-396456-4.00006-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gorelick DA ကင်မ် YK, Bencherif ခ, ဘှိုငျဒျ SJ, နယ်လ်ဆင် R. , Copersino ML, et al ။ (2008) ။ ဦးနှောက် mu-opioid အဲဒီ receptor binding: ကြားဆက်ဆံရေး monitor နေကြပြီးကင်းအသုံးပြုမှုမှပြန်သွားကြသည်ရန်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 200, 475-48610.1007 / s00213-008-1225-5 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Groman သည် SM, Jentsch JD (2012) ။ သိမှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့် dopamine: D (2) -like အဲဒီ receptor: စွဲနေတဲ့ရှုထောင်နားလည်မှု။ စိတ်ကျရောဂါ။ စိုးရိမ်စိတ် 29, 295-30610.1002 / da.20897 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
စုစုပေါင်း G. အ, Drescher K. (2012) ။ စမ်းသပ်ဆေးဝါးဗေဒ၏လက်စွဲစာအုပ်, eds Geyer အမ်, စုစုပေါင်း G. အ, အယ်ဒီတာများအတွက် "antipsychotic လှုပ်ရှားမှုနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် dopamine D (3) receptors ၏အခန်းကဏ္,ကို" ။ (Heidelberg: Springer;), 167-210 [PubMed]
စုစုပေါင်း RA, မော HC, Uhler MD, Macdonald RL (1990) ။ Dynorphin A နှင့်စခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း kinase လွတ်လပ်စွာအာရုံခံကယ်လစီယမ်ရေစီးကြောင်းကိုထိန်းညှိ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 87, 7025-702910.1073 / pnas.87.18.7025 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Grudt တီဂျေ, Williams က JT (1993) ။ Kappa-Opioid receptors လည်းပိုတက်စီယမ် conduction တိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 90, 11429-1143210.1073 / pnas.90.23.11429 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haney အမ်, Collins က ED, ရပ်ကွက် AS, Foltin RW, Fischman မဂ္ဂါဝပ် (1999) ။ လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ်တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine D1 agonist (ABT-431) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 143, 102-11010.1007 / s002130050925 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Haney အမ်, ရပ်ကွက် AS, Foltin RW, Fischman မဂ္ဂါဝပ် (2001) ။ လူသားမြားသဖွငျ့သောက်သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် ecopipam ၏ဆိုးကျိုးများ, တစ်ဦးရွေးချယ် dopamine D1 ရန်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 155, 330-33710.1007 / s002130100725 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heijna MH, Bakker JM, Hogenboom အက်ဖ်, Mulder AH, Schoffelmeer AN (1992) ။ Opioid receptors နှင့်တစ်ဦးသိပ်သည်း dopaminergic input ကိုလက်ခံရရှိကြွက်ဦးနှောက်ဒေသချပ်ထဲမှာ dopamine-အထိခိုက်မခံ adenylate cyclase ၏တားစီး။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 229, 197-20210.1016 / 0014-2999 (92) 90555-ငါ [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Heijna MH, Padt အမ်, Hogenboom အက်ဖ်, Portoghese PS, Mulder AH, Schoffelmeer AN (1990) ။ dopamine နဲ့ acetylcholine ကြွက်နျူကလိယ accumbens ၏ချပ်ကနေဖြန့်ချိ, olfactory tubercle နှင့်တိုကျရိုကျ cortex ၏ Opioid အဲဒီ receptor-mediated တားစီး။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 181, 267-27810.1016 / 0014-2999 (90) 90088-N ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hurd YL, Herkenham အမ် (1993) ။ လူ့ကင်းစွဲ၏ neostriatum အတွက်မော်လီကျူးကိုပြောင်းလဲ။ synapses 13, 357-36910.1002 / syn.890130408 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hurd YL, Herkenham အမ် (1995) ။ တစ်ဦး situ အတွက် Hybrid histochemical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အဆိုပါလူ့ neostriatum dorsal နှင့် ventral ဒေသများတွင် neuropeptide ဗီဇထုတ်ဖော် compartmentalization ပြသထားတယ်။ neuroscience 64, 571-58610.1016 / 0306-4522 (94) 00417-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Innis RB, Cunningham VJ, Delforge ဂျေ, Fujita အမ်, Gjedde အေ, ဂွန် RN, et al ။ (2007) ။ reversibly စည်းနှောင် radioligands ၏အတွင်း Vivo ပုံရိပ်အဘို့အများသဘောတူညီမှု nomenclature ။ ဂျေ Cereb ။ သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 27, 1533-153910.1038 / sj.jcbfm.9600493 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Iremonger KJ, Bain JS (2009) ။ Retrograde opioid အချက်ပြသည့် hypothalamus အတွက် glutamatergic ဂီယာထိန်းညှိ။ ဂျေ neuroscience ။ 29, 7349-735810.1523 / JNEUROSCI.0381-09.2009 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Izenwasser အက်စ်, Acri JB, Kunko pm တွင်, Shippenberg တီ (1998) ။ ရွေးချယ်ထားသော kappa opioid agonist U-69593 ဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုသည် dopamine D2 receptors ၏သိသိသာသာလျော့နည်းသွားသည်။ Synapse 30, 275-28310.1002 / (SICI) 1098-2396 (199811) 30:3<275 :: AIDSYN5> 3.0.CO; 2-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jackisch R. , Hotz အိပ်ချ်, Allgaier C. , Hertting G. အ (1994) ။ ယုန် caudate နျူကလိယအတွက် dopaminergic အာရုံကြောအပေါ် Presynaptic opioid receptors: D2 autoreceptors နှင့်အတူကြက်ညှာချောင်းဆိုးအဆိပ်အတောက်-အထိခိုက်မခံ, G-ပရိုတိန်းနှင့်အပြန်အလှန်ဖို့နားဆက်မှီရာတွင်? Naunyn Schmiedebergs Arch ။ Pharmacol ။ 349, 250-25810.1007 / BF00169291 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jenab အက်စ်, Festa ED, Russo SJ, Wu HB, Inturrisi အီး, Quinones-Jenab V. (2003) ။ MK-801 က c-fos နှင့် Fischer ကြွက်များတွင် preprodynorphin mRNA အဆင့်ဆင့်၏ကင်းသော induction attenuates ။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 117, 237-23910.1016 / S0169-328X (03) 00319X [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဂျုံးစ် RM, Portoghese PS (2000) ။ 5'-Guanidinonaltrindole တစ်အလွန်အမင်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အစွမ်းထက် Kappa-opioid အဲဒီ receptor ရန်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 396, 49-5210.1016 / S0014-2999 (00) 00208-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kirkland ဟင်နရီ P. , Davis ကအမ်, Howell ll (2009) ။ မျောက်တွေကို၌ Vivo striatal dopamine neurochemistry နှင့် acoustic ထိတ်လန့်အပေါ်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်အခြေအနေများအောက်တွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးသမိုင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 205, 237-24710.1007 / s00213-009-1534-3 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Knoll ကို AT, Muschamp JW, Sillivan SE, ဖာဂူဆန်ဃ, Dietz DM, Meloni ဥပမာ et al ။ (2011) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala အတွက်အချက်ပြ Kappa opioid အဲဒီ receptor ကြွက်များတွင် conditional ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်ထိန်းညှိ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 70, 425-43310.1016 / j.biopsych.2011.03.017 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf (2013) ။ သီအိုရီမူဘောင်များနှင့်အရက်စွဲ၏ mechanistic ရှုထောင့်: အကျိုးကိုလိုငွေပြမှုရောဂါအဖြစ်အရက်စွဲ။ Curr ။ ထိပ်တန်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 13, 3-3010.1007 / 7854_2011_129 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Ahmed က SH, Boutrel ခ, Chen က SA, Kenny PJ, Markou အေ, et al ။ (2004) ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် Neurobiological ယန္တရားများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 27, 739-74910.1016 / j.neubiorev.2003.11.007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Koob gf, Le Moal အမ် (2008) ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက် antireward စနစ်။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 59, 29-5310.1146 / annurev.psych.59.103006.093548 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kreek MJ, Levran O. , ရိဒ်ခ, Schlussman SD, Zhou Y. , Butelman ER (2012) ။ Opiate စွဲနှင့်ကိုကင်းစွဲ: နောက်ခံမော်လီကျူး neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 122, 3387-339310.1172 / JCI60390 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lacey MG, Mercury NB မြောက်ပိုင်း RA (1990) ။ စသည်တို့အတွက်ကြွက် dopaminergic အာရုံခံအပေါ်ကိုကင်းများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 99, 731-73510.1111 / j.1476-5381.1990.tb12998.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lahti RA, Mickelson MM, McCall JM, Von Voigtlander PF (1985) ။ [3H] ဦး-69593 အဆိုပါ opioid Kappa အဲဒီ receptor များအတွက်အလွန်အမင်းရွေးချယ် ligand ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 109, 281-28410.1016 / 0014-2999 (85) 90431-5 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မြေယာ BB, Bruchas MR, Lemos JC, Xu အမ်, Melief EJ, Chavkin C. (2008) ။ စိတ်ဖိစီးမှု၏ dysphoric အစိတ်အပိုင်း dynorphin Kappa-opioid စနစ်၏ activation အားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 407-41410.1523 / JNEUROSCI.4458-07.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Laorden ML, Castells MT, Martinez MD, Martinez PJ, Milan သင်္ဘော MV (2000) ။ က c-fos mu- အားဖြင့် hypothalamic အရေးပါအတွက်စကားရပ်နှင့် Kappa-receptor agonists ၏ activation: အ hypothalamic paraventricular နျူကလိယအတွက် catecholaminergic လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ် 141, 1366-137610.1210 / en.141.4.1366 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Laruelle အမ် (2000) ။ အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ် in: Vivo စည်းနှောင်ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းစနစ်နှင့်အတူ Synaptic neurotransmission Imaging ။ ဂျေ Cereb ။ သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 20, 423-45110.1097 / 00004647-200003000-00001 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Laruelle အမ်, Iyer RN, Al-Tikriti MS, Zea-Ponce Y. , Malison R. , Zoghbi SS, et al ။ (1997) ။ nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် amphetamine- သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Microdialysis နှင့် SPECT တိုင်းတာ။ Synapse 25, 1-1410.1002 / (SICI) 1098-2396 (199701) 25: 1 <1 :: AIDSYN1> 3.0.CO; 2-H ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဥပဒေ py, Wong က YH, Loh သည်နာရီ (2000) ။ မော်လီကျူးယန္တရားများနှင့် opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြ၏စည်းမျဉ်း။ Annu ။ ဗျာ Pharmacol ။ Toxicol ။ 40, 389-43010.1146 / annurev.pharmtox.40.1.389 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lee က TH, Gao WY, Davidson C. , Ellinwood Eh (1999) ။ နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုထံမှ7ရက်ကြာဆုတ်ခွာအောက်ပါ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ပြောင်းလဲလှုပ်ရှားမှုအစောပိုင်းရုပ်သိမ်းအဆင့်စဉ်အတွင်း D2 အဲဒီ receptor ဆွနေဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 21, 127-13610.1016 / S0893-133X (99) 00011-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လီ SJ, Sivam SP, McGinty JF, Jiang ဟောင်ကောင်, Douglass ဂျေ, Calavetta L. , et al ။ (1988) ။ အဆိုပါ dopaminergic စနစ်ဖြင့် striatal dynorphin ၏ဇီဝြဖစ်၏စည်းမျဉ်း။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 246, 403-408 [PubMed]
Little က KY, Kirkman ဂျာကာရိုး FI, Clark ကတီဘီ, Duncan က GE (1993) ။ ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်း [3H] WIN 35428 လူ့ striatum အတွက်ဆိုဒ်များ binding တိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 628, 17-2510.1016 / 0006-8993 (93) 90932-D ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Little က KY, Zhang ကအယ်လ်, Desmond တီ, Frey Ka, Dalack GW, Cassin BJ (1999) ။ လူ့ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Striatal dopaminergic မူမမှန်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 156, 238-245 [PubMed]
လျူ FC အသင်း, Graybiel လေး (1998) ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ striatum အတွက် Dopamine နှင့်ကယ်လစီယမ် signal ကို interaction က: CREB phosphorylation ၏ kinetics အားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှု။ Adv ။ Pharmacol ။ 42, 682-68610.1016 / S1054-3589 (08) 60840-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Lobo MK, Covington သူ, III ကို, Chaudhury ဃ, Friedman AK Sun, အိပ်ချ်, Damez-Werno ဃ။ (2010) ။ တူတဲ့ကင်းဆုလာဘ်၏ optogenetic ထိန်းချုပ်မှုအချက်ပြ BDNF ၏ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့အရှုံး။ သိပ္ပံ 330, 385-39010.1126 / science.1188472 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Maisonneuve ထားတဲ့ IM, Archer အက်စ်, Glick SD က (1994) ။ U50,488 တစ် Kappa agonist, ကြွက်များ၏နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အတွက်ကင်း-သွေးဆောင်တိုး attenuates ။ neuroscience ။ လက်တ။ 181, 57-6010.1016 / 0304-3940 (94) 90559-2 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Malison RT ကို, အကောင်းဆုံး SE, ဗန် Dyck CH, McCance EF, Wallace EA ၏, Laruelle အမ်, et al ။ (1998) ။ စူးရှသောကိုကင်း abstinence စဉ်အတွင်း elevated striatal dopamine ပို့ဆောင်ရေး [123I] beta ကို-cit SPECT ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 155, 832-834 [PubMed]
et al Malison RT ကို, စက်ပြင် KY, Klummp အိပ်ချ်, Baldwin RM, Kosten TR, Seibyl JP ။ (1999) ။ [123I] IBZM SPECT ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ကိုကင်းစွဲများတွင်စိတ်ကြွဆေး-နှိုးဆွ dopamine လွှတ်ပေးရန်လျှော့ချ။ ဂျေ Nucl ။ Med ။ 40, 110 ။
Margolis eb, Hjelmstad GO, Bonci အေ, Fields HL (2003) ။ Kappa-opioid agonists တိုက်ရိုက် midbrain dopaminergic အာရုံခံတားစီး။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 9981-9986 [PubMed]
Margolis eb, Lock ကိုအိပ်ချ်, Chefer VI ကို, Shippenberg TS, Hjelmstad GO, Fields HL (2006) ။ Kappa opioids ရွေးချယ်သည့် prefrontal cortex မှထုတ်လုပ်တဲ့ dopaminergic အာရုံခံထိန်းချုပ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 103, 2938-294210.1073 / pnas.0511159103 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Marinelli အမ်, Cooper က, DC, Baker LK, အဖြူရောင် FJ (2003) ။ midbrain dopamine အာရုံခံ၏ Impulse လှုပ်ရှားမှုမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူ modulates ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 168, 84-9810.1007 / s00213-003-1491-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Broft အေ, Foltin RW, Slifstein အမ်, Hwang DR, Huang က Y. , et al ။ (2004) ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့် striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက် d2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု: ကင်း-ရှာအပြုအမူနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Neuropsychopharmacology 29, 1190-120210.1038 / sj.npp.1300420 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, လက်သမား KM, et al လျူအက်ဖ်, Slifstein အမ်, Broft အေ, Friedman AC အ။ (2011) ။ ကိုကင်းမှီခိုအတွက် dopamine ဂီယာ Imaging: neurochemistry နှင့်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်အကြား link ကို။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 168, 634-64110.1176 / appi.ajp.2010.10050748 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, ဂရင်း K. , Broft အေ, Kumar ကဃ, et al လျူအက်ဖ်, Narendran R. ။ (2009a) ။ ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် endogenous dopamine ၏အနိမ့်အဆင့်ကို: စူးရှ dopamine လျော့ကျအောက်ပါ: D (2) / D ကို (3) receptors ၏ပေပုံရိပ်ကနေတွေ့ရှိချက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 166, 1170-117710.1176 / appi.ajp.2009.08121801 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Slifstein အမ်, Narendran R. , Foltin RW, Broft အေ, Hwang DR, et al ။ (2009b) ။ Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းမှပေနှင့်ရှေးခယျြမှုနှင့်အတူတိုင်းတာကင်းမှီခိုအတွက် Dopamine D1 receptors ။ Neuropsychopharmacology 34, 1774-178210.1038 / npp.2008.235 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃကင်မ် JH, Krystal ဂျေ, အာဘိ-Dargham အေ (2007a) ။ အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏ neurochemistry Imaging ။ Neuroimaging Clin ။ N. Am ။ 17, 539-55510.1016 / j.nic.2007.07.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Narendran R. , Foltin RW, Slifstein အမ်, Hwang DR, Broft အေ, et al ။ (2007b) ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: သိသိသာသာကင်းမှီခိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ရှေးခယျြမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 164, 622-62910.1176 / appi.ajp.164.4.622 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Narendran R. (2010) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် imaging neurotransmitter လွှတ်ပေးရန်။ Curr ။ ထိပ်တန်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 3, 219-24510.1007 / 7854_2009_34 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Saccone PA ဆိုပြီး, et al လျူအက်ဖ်, Slifstein အမ်, Orlowska ဃ, Grassetti အေ။ (2012) ။ dopamine: D (2) receptors နှင့်ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက် presynaptic dopamine အတွက်လိုငွေပြမှု: စွဲတခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူဆင်တူရိုးမှားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 71, 192-19810.1016 / j.biopsych.2011.08.024 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Martinez ဃ, Slifstein အမ်, Broft အေ, Mawlawi O. , Hwang DR, Huang က Y. , et al ။ (2003) ။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူလူ့ mesolimbic dopamine ဂီယာ Imaging ။ အပိုင်း II ကို: အ striatum ရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဂျေ Cereb ။ သွေးစီးဆင်းမှု Metab ။ 23, 285-30010.1097 / 00004647-200303000-00004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
mash, DC, Staley JK (1999) ။ ကိုကင်း-အလွန်အကျွံသုံးစွဲသားကောင်များ၏လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ D3 dopamine နဲ့ Kappa opioid အဲဒီ receptor ကိုပြောင်းလဲ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 877, 507-52210.1111 / j.1749-6632.1999.tb09286.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Matuskey ဃ, Gallezot ဂျေ, Keunpoong L. , Zheng အမ်, Lin ကအက်စ်, Carson R. , et al ။ (2011) ။ ကိုကင်းမှီခိုလူသားတွေအတွက် binding Subcortical D3 / D2 အဲဒီ receptor ။ ဂျေ Nucl ။ Med ။ 52, 1284
McClung, CA, Nestler EJ (2008) ။ Neuroplasticity ပြောင်းလဲဗီဇစကားရပ်ကကမကထပြုခဲ့။ Neuropsychopharmacology 33, 3-1710.1038 / sj.npp.1301544 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V. , Berton O. , Nestler EJ (2004) ။ DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 132, 146-15410.1016 / j.molbrainres.2004.05.014 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McLaughlin JP, မြေ BB လီအက်စ်, Pintar je, Chavkin C. (2006) ။ U50,488 တူတဲ့အားဖြင့် Kappa opioid receptors ၏မတိုင်မီက activation ကိုကင်းရာအရပ်ကို preference ကိုအေးစက် potentiate ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုထပ်ခါတလဲလဲ။ Neuropsychopharmacology 31, 787-79410.1038 / sj.npp.1300860 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McLaughlin JP, Marton-Popovici အမ်, Chavkin C. (2003) ။ Kappa opioid အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းများနှင့်မျိုးရိုးဗီဇပြတ်တောက်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု prodynorphin ။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 5674-5683 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Meador-Woodruff JH, Little က KY, Damask SP, Mansour အေ, Watson ဟာ SJ (1993) ။ အဆိုပါ postmortem လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာလေ့လာမှု: dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 34, 348-35510.1016 / 0006-3223 (93) 90178-G [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Melis အမ်, Spiga အက်စ်, ဒိုင်ယာနာအမ် (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ dopamine အယူအဆ: hypodopaminergic ပြည်နယ်။ int ။ ဗျာ Neurobiol ။ 63, 101-15410.1016 / S0074-7742 (05) 63005-X ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မော်ဂန်ဃ, Grant က ka, et al Gage, HD, Mach RH အ, Kaplan JR, Prioleau O. ။ (2002) ။ dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး: မျောက်အတွက်လူမှုကြီးစိုး။ နတ်။ neuroscience ။ 5, 169-17410.1038 / nn798 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Mucha RF, Herz အေ (1985) ။ အရပ်ဌာနနှင့်အရသာ preference ကိုအေးစက်နှင့်အတူလေ့လာခဲ့ Kappa နှင့် mu opioid အဲဒီ receptor agonists ၏စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 86, 274-28010.1007 / BF00432213 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Munro, CA, McCaul ME, Wong က DF, Oswald LM, Zhou Y. , Brasic ဂျေ, et al ။ (2006) ။ ကျန်းမာလူကြီးများအတွက် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 59, 966-97410.1016 / j.biopsych.2006.01.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
JW, Carlezon WA, ဂျူနီယာ (2013) Muschamp ။ နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍလှုံ့ဆျောမှု၏ dysregulation အတွက် CREB နှင့် dynorphin accumbens ။ အေးနွေ Harb ။ ရှုထောင့်။ Med ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ 10.1101 / cshperspect.a012005 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nader, MA, မော်ဂန်ဃ, Gage, HD, Nader SH, Calhoun TL, Buchheimer N. , et al ။ (2006) ။ မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။ နတ်။ neuroscience ။ 9, 1050-105610.1038 / nn1737 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Narendran R. , Lopresti BJ, Martinez ဃ, Mason ဆို NS, Himes အမ်, မေလ, MA ။ (2012) ။ အနိမ့် striatal vesicular monoamine Transporter2(VMAT2) ကိုကင်းချိုးဖောက်ရရှိနိုင်မှုများအတွက် Vivo သက်သေအထောက်အထားအတွက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 169, 55-6310.1176 / appi.ajp.2011.11010126 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Nikolarakis Ke, Herz အေ (1986), OF Almeida ။ (စသည်တို့အတွက်) corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် hypothalamic beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins နှင့် dynorphin လွှတ်ပေးရေး stimulation ။ ဦးနှောက် Res ။ 399, 152-15510.1016 / 0006-8993 (86) 90610-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Oliveto အေ, ဝင်ရိုးစွန်းဂျေ, Mancino MJ, Williams က DK, Thostenson ဂျေ, Pruzinsky R. , et al ။ (2012) ။ Sertraline စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူမကြာသေးမီက abstinent ကင်း-မှီခိုလူနာ relapse နှောင့်နှေး။ စွဲ 107, 131-14110.1111 / j.1360-0443.2011.03552.x [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Parsons LH, Smith ကအေဒီ, တရားမျှတမှု JB ဂျူနီယာ (1991) ။ Basal extracellular dopamine နာတာရှည်ကင်းထံမှ abstinence စဉ်အတွင်းကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ synapses 9, 60-6510.1002 / syn.890090109 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pascoli V. , Turiault အမ်, Luscher C. (2012) ။ ကိုကင်း-evoked Synaptic အလားအလာပြောင်းပြန်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်သပ္ပါယ်အပြုအမူ reset လုပ်တယ်။ သဘာဝတရား 481, 71-7510.1038 / nature10709 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pfeiffer အေ, Brantl V. , Herz အေ, Emrich HM (1986) ။ Psychotomimesis Kappa opiate receptors ကကမကထပြုခဲ့။ သိပ္ပံ 233, 774-77610.1126 / science.3016896 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Redila VA သို့, Chavkin C. (2008) ။ ကိုကင်းရှာ၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အဆိုပါ Kappa opioid သည့်စနစ်ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 200, 59-7010.1007 / s00213-008-1122-y က [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Robertson ကမီဂါဝပ်, Leslie, CA, Bennett က JP ဂျူနီယာ (1991) ။ နာတာရှည်ကင်းကုသမှုကနေဆုတ်ခွာခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်သိသာ Synaptic dopamine ချို့တဲ့။ ဦးနှောက် Res ။ 538, 337-33910.1016 / 0006-8993 (91) 90451-Z ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rossetti ZL, Melis အက်ဖ်, Carboni အက်စ်, Gessa GL (1992) ။ မော်ဖင်းအကိုက်, အရက်သို့မဟုတ်ကင်းကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက် mesolimbic extracellular dopamine ၏အံ့သြဖွယ်တွေပျက်စီးမှု: မူးယစ်ဆေးမှီခိုတစ်ဘုံ neurochemical အလွှာဟာ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 654, 513-51610.1111 / j.1749-6632.1992.tb26016.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roth BL, Baner K. , Westkaemper R. , Siebert ဃ, ဆန် KC, Steinberg အက်စ်, et al ။ (2002) ။ Salvinorin A: အစွမ်းထက်သဘာဝဖြစ်ပေါ် nonnitrogenous Kappa opioid ရွေးချယ် agonist ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 99, 11934-1193910.1073 / pnas.182234399 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salamone JD ကော်ရဲရားအမ် (2012) ။ mesolimbic dopamine ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အာရုံခံဆဲလျ 76, 470-48510.1016 / j.neuron.2012.10.021 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schlussman SD, Zhang က Y. , Yuferov V. , Laforge KS, ဟိုအေ, Kreek MJ (2003) ။ acute '' မူးရူး '' ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် C57BL / 6J ၏ caudate putamen သော်လည်းမ 129 / J ကိုကြွက်များတွင် dynorphin mRNA elevates ။ ဦးနှောက် Res ။ 974, 249-25310.1016 / S0006-8993 (03) 02561-7 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schlussman SD က, Zhou Y. , Bailey အေ, ဟိုအေ, Kreek MJ (2005) ။ ကိုကင်း၏တည်ငြိမ်သောဆေးထိုးခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့်ဆေးဖြင့်“ မူးယစ်ဆေးဝါး” အုပ်ချုပ်မှုသည်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာပုံစံများနှင့်မျိုးရိုးလိုက် preprodynorphin mRNA အဆင့်များကိုဖော်ပြသည်။ Brain Res ။ နွား။ 67, 169-17510.1016 / j.brainresbull.2005.04.018 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (2006) ။ အမူအကျင့်သီအိုရီနှင့်ဆုလာဘ်များ neurophysiology ။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 57, 87-11510.1146 / annurev.psych.56.091103.070229 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shippenberg TS, Zapata အေ, Chefer VI ကို (2007) ။ Dynorphin နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ pathophysiology ။ Pharmacol ။ Ther ။ 116, 306-32110.1016 / j.pharmthera.2007.06.011 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shirayama Y. , Ishida အိပ်ချ်, Iwata အမ်, Hazama GI, Kawahara R. , Duman သည် RS (2004) ။ စိတ်ဖိစီးမှု limbic ဦးနှောက်ဒေသများတွင် dynorphin immunoreactivity တိုးပွါးနှင့် dynorphin ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတူသောသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဂျေ Neurochem ။ 90, 1258-126810.1111 / j.1471-4159.2004.02589.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Shoptaw အက်စ်, Majewska MD, Wilkins တို့ဂျေ, Twitchell G. အယန် X တို့မှာ, လိန်းဒဗလျူ (2004) ။ ကိုကင်းမှီခိုဘို့ကုသမှုစဉ်အတွင်း dehydroepiandrosterone လက်ခံရရှိပါဝင်သူတစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled ရှေ့ပြေးလေ့လာမှုကိုကင်းသုံးစွဲမှုမြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုပြ။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 12, 126-13510.1037 / 1064-1297.12.2.126 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sinha R. , Catapano ဃ, O'Malley အက်စ် (1999) ။ ကိုကင်းမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 142, 343-35110.1007 / s002130050898 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sinha R. , Garcia ကအမ်, Paliwal P. , Kreek MJ, Rounsaville BJ (2006) ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကင်း relapse ရလဒ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63, 324-33110.1001 / archpsyc.63.3.324 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sivam SP (1989) ။ ကိုကင်း Selectadopaminergic ယန္တရားအားဖြင့် striatonigral dynorphin အဆင့်ဆင့်တိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 250, 818-824 [PubMed]
Sivam SP (1996) ။ အဆိုပါ dopamine လွှာမှ inhibitor GBR-12909 အတူလေ့လာမှု: striatonigral tachykinin နှင့် dynorphin ဗီဇထုတ်ဖော် Dopaminergic စည်းမျဉ်း။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 35, 197-21010.1016 / 0169-328X (95) 00216-F [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
အပြုံးပုံ PL, ဂျွန်ဆင်အမ်, ဘုရ်ှကအယ်လ်, Gibbs JW, Hanson ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း (1990) ။ extrapyramidal နှင့် limbic dynorphin စနစ်များအပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 253, 938-943 [PubMed]
Sokoloff P. , Diaz ဂျေ, et al သည် Le Foll ခ, Guillin O. , Leriche L. , Bezard အီး။ (2006) ။ အဆိုပါ dopamine D3 အဲဒီ receptor: အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်ကုထုံးပစ်မှတ်။ CNS Neurol ။ disorders ။ မူးယစ်ဆေးပစ်မှတ် 5, 25-43 [PubMed]
သီချင်း ZH, Takemori AE (1992) ။ စသည်တို့အတွက် mouse ကိုကျောရိုးကြိုးကနေ immunoreactive dynorphin တစ်ဦး၏လွှတ်ပေးရေး corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် stimulation ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 222, 27-3210.1016 / 0014-2999 (92) 90458-G [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spanagel R. , Herz အေ, Shippenberg တီ (1992) ။ ဆန့်ကျင်လုပ်သူများတက်ကြွ endogenous opioid စနစ်များ mesolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်း modulate ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 89, 2046-205010.1073 / pnas.89.6.2046 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spanagel R. , Herz အေ, Shippenberg TS (1990) ။ နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် opioid peptides ၏သက်ရောက်မှု accumbens: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ ဂျေ Neurochem ။ 55, 1734-174010.1111 / j.1471-4159.1990.tb04963.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spangler R. , Ho A. , Zhou Y. , Maggos CE, Yuferov V. , Kreek MJ (1996) "မူးရူး" ပုံစံကိုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် preprodynorphin mRNA နှင့်ဆက်စပ်မှုအားဖြင့်ကြွက် ဦး နှောက်ထဲမှာ kappa opioid အဲဒီ receptor mRNA ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း။ Brain Res ။ mol ။ Brain Res ။ 38, 71-7610.1016 / 0169-328X (95) 00319-N ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Spangler R. , Unterwald အီး, Kreek အမ် (1993) ။ Bing ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက် caudate-putamen အတွက် mRNA prodynorphin တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးဖြစ်ပေါ်သည်။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 19, 323-32710.1016 / 0169-328X (93) 90133-တစ်ဦးက [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Staley JK, Rothman RB, ဆန် KC, Partilla ဂျေ, mash DC က (1997) ။ လူ့ဦးနှောက်၏ limbic ဒေသများရှိ Kappa2 opioid receptors ဆိုးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲသားကောင်များအတွက်ကိုကင်းများက upregulated နေကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 17, 8225-8233 [PubMed]
Svingos အေ, Chavkin C. , Colago အီး, Pickel V. (2001) ။ နျူကလိယအတွက်ဋ-opioid receptors နှင့် dopamine ပို့ဆောင်ရေးဗိုလ်မှူး coexpression axon profile များကို accumbens ။ synapses 42, 185-19210.1002 / syn.10005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
တန် AH, Collins က RJ (1985) ။ ကြွက်များနှင့်မျောက်တွေကိုအတွက်ဝတ္ထု Kappa opioid analgesic, ဦး-50488 ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 85, 309-31410.1007 / BF00428193 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tejeda HA, Shippenberg TS, Henriksson R. (2012) ။ အဆိုပါ dynorphin / Kappa-opioid အဲဒီ receptor စနစ်နှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ cell ။ Mol ။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 69, 857-89610.1007 / s00018-011-0844-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Thompson ကအေ, Zapata အေ, တရားမျှတမှုဂျေ, Vaughan R. , ရှပ် L. , Shippenberg တီ (2000) ။ Kappa-opioid အဲဒီ receptor activation ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု accumbens နှင့်ဆန့်ကျင်သည့်နျူကလိယအတွက် dopamine လွှာမှပြုပြင်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 20, 9333-9340 [PubMed]
ur အီး, Wright DM, Bouloux pm တွင်, မမေ့ဘူးအေ (1997) ။ လူကို neuroendocrine function ကိုအပေါ် spiradoline ၏ဆိုးကျိုးများ (U-62066E), တစ်ဦး Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ။ br ။ ဂျေ Pharmacol ။ 120, 781-78410.1038 / sj.bjp.0700971 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Platt DM, Rowlett JK, Ruedi-Bettschen ဃ, Spealman RD (2007) ။ ရှဉ့်မျောက်များအတွက်ရှာကြံကင်း၏ Kappa agonist-သွေးဆောင် reinstatement: opioid နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related ယန္တရားများများအတွက်အခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 323, 525-53310.1124 / jpet.107.125484 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Valjent အီး, Bertran-Gonzalez ဂျေ, Herve ဃ, Fisone G. အ, Girault ဂျေအေ (2009) ။ striatal အချက်ပြမှာ BAC ရှာနေ: အသစ်အရ Transgene ကြွက်တွေမှာဆဲလ်-တိကျတဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 32, 538-54710.1016 / j.tins.2009.06.005 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဗန် Bockstaele EJ, Gracy KN, Pickel VM က (1995) ။ ကြွက်နျူကလိယအတွက် Dynorphin-immunoreactive အာရုံခံ accumbens: ပစ္စည်းဥစ္စာ P နှင့် / သို့မဟုတ် dynorphin ်ဆိပ်ကမ်းကနေ ultrastructure နှင့် Synaptic input ကို။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 351, 117-13310.1002 / cne.903510111 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R. , Logan ဂျေ, Schlyer DJ သမား။ (1993) ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses 14, 169-17710.1002 / syn.890140210 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Volkow ND, မုဆိုး JS, Wolf ကအေပီ, Schlyer ဃ, Shiue CY, Alpert R. ။ (1990) ။ postsynaptic dopamine receptors အပေါ်နာတာရှည်ကင်းအလွဲသုံးစားမှုဆိုးကျိုးများ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 147, 719-724 [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Hitzemann R. , Angrist ခ, Gatley SJ ။ (1999) ။ စွဲလမ်းအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: ကင်းချိုးဖောက်ပိုင်ခွင့် striato-orbitofrontal ဇီဝြဖစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ methylphenidate-သွေးဆောင်တဏှာ၏အသင်းမှ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု 156, 19-26 [PubMed]
Volkow ND, et al ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan ဂျေ, Gatley SJ, Hitzemann R. ။ (1997) ။ detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝတရား 386, 830-83310.1038 / 386830a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
et al Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan ဂျေ, Hitzemann R. , Ding YS ။ (1996) ။ အရက်သမားအတွက် dopamine receptors အတွက်မဟုတ် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 20, 1594-1598 [PubMed]
et al Volkow ND, ဝမ် G.-J. , မုဆိုး JS, Logan ဂျေ, Schlyer ဃ, Hitzemann R. ။ (1994) ။ [အတူ Imaging endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင်11ကို C] လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ raclopride ။ synapses 16, 255-26210.1002 / syn.890160402 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
von Voigtlander PF, Lewis က RA (1982) ။ ဦး-50,488 တစ်ဦးရွေးချယ် Kappa opioid agonist: ကအခြားကြည်ကြည် Kappa agonists မှနှိုင်းယှဉ်။ prog ။ Neuropsychopharmacol ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 6, 467-47010.1016 / S0278-5846 (82) 80130-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wadenberg ML (2003) ။ spiradoline ၏ဂုဏ်သတ္တိများ၏တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် Kappa-opioid အဲဒီ receptor agonist ။ CNS မူးယစ်ဆေးဗျာ 9, 187-19810.1111 / j.1527-3458.2003.tb00248.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Walsh SL, Geter-ဒေါက်ဂလပ်ခ, EC, Bigelow GE (2001) strain ။ Enadoline နှင့် butorphanol: ကင်း pharmacodynamics နှင့်လူသားတွေအတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအပေါ် Kappa-agonists ၏အကဲဖြတ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 299, 147-158 [PubMed]
Walters က CL, Blendy ဂျေအေ (2001) ။ စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်အဘို့ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ပရိုတိန်းကိုစညျး။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 9438-9444 [PubMed]
ဝမ် GJ, စမစ်အယ်လ်, Volkow ND, Telang အက်ဖ်, Logan ဂျေ, Tomasi ဃ, et al ။ (2012) ။ dopamine လှုပ်ရှားမှုစိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက် relapse ဟောကိန်းထုတ်လျော့နည်းသွားသည်။ Mol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု 17, 918-92510.1038 / mp.2011.86 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် GJ, Volkow ND, မုဆိုး JS, Fischman အမ်, Foltin R. , Abumrad NN, et al ။ (1997) ။ ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံးအသက်အရွယ်နှင့်အတူ dopamine ပို့ဆောင်ရေး၏အရှုံးမပြကြဘူး။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 61, 1059-106510.1016 / S0024-3205 (97) 00614-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wee အက်စ်, Koob gf (2010) ။ အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဆိုးကျိုးများအတွက် dynorphin-Kappa opioid စနစ်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 210, 121-13510.1007 / s00213-010-1825-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Wee အက်စ်, Orio L. , Ghirmai အက်စ်, Cashman JR, Koob gf (2009) ။ Kappa opioid receptors ၏တားစီးကိုကင်းထပ်တိုးခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ကင်းစားသုံးမှု attenuated ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 205, 565-57510.1007 / s00213-009-1563-y က [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Weiss အက်ဖ်, Paulus အမတ်, Lorang MT, Koob gf (1992) ။ စူးရှနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးသက်ရောက်မှု: ကိုကင်းအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အတွက်တိုးမြှင့်ပြောင်းပြန် Basal အဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 12, 4372-4380 [PubMed]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2008) ။ Dopamine နှင့်ဆုလာဘ်: ပေါ်တွင် anhedonia အယူအဆ 30 နှစ်ပေါင်း။ Neurotox ။ res ။ 14, 169-18310.1007 / BF03033808 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝူ JC, ဘဲလ် K. , Najafi အေ, Widmark C. , Keator ဃ, တန် C. , et al ။ (1997) ။ ကိုကင်းဆုတ်ခွာ၏တိုးမြှင့်ကြာချိန်နှင့်အတူ striatal 6-FDOPA လွှာမှလျော့ကျလာ။ Neuropsychopharmacology 17, 402-40910.1016 / S0893-133X (97) 00089-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရှီ ZX, Fuller လုပ် SA, Stein EA ၏ (1998) ။ တစ်ဦးအတွက် Vivo အစာရှောင်ခြင်း-သိသိ voltammetry လေ့လာမှု: ဘိန်းဖြူ Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်းနျူကလိယ accumbens အတွက် Dopamine လွှတ်ပေးရန် Kappa opioid receptors အားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 284, 151-161 [PubMed]
Yokoo အိပ်ချ်, Yamada အက်စ်, Yoshida အမ်, Tanaka အမ်, Nishi အက်စ် (1992) ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲကုသမှုအားဖြင့်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် dynorphin ၏ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုများ attenuation ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 222, 43-4710.1016 / 0014-2999 (92) 90461-C ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သငျသညျ ZB, Herrera-Marschitz အမ်, Terenius L. (1999) ။ peptides dynorphin အားဖြင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏ Basal ganglia အတွက် neurotransmitter လွှတ်ပေးရေး Modulation ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 290, 1307-1315 [PubMed]
Yuferov V. , Zhou Y. , Laforge KS, Spangler R. , Ho A. , Kreek MJ (2001) ။ "မူးရူး" ပုံစံကိုအုပ်ချုပ်ရေးအားဖြင့် guinea ဝက် ဦး နှောက် preprodynorphin mRNA စကားရပ်နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုမြင့်။ Brain Res ။ နွား။ 55, 65-7010.1016 / S0361-9230 (01) 00496-8 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang က Y. , Butelman ER, Schlussman SD, ဟိုအေ, Kreek MJ (2004a) ။ striatal dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့် C1BL / 17J ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအတွက်ကိုကင်း-evoked တိုးအပေါ်တစ်ဦး (57-6) dynorphin အဆိုပါ endogenous Kappa opioid agonist ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 172, 422-42910.1007 / s00213-003-1688-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang က Y. , Butelman ER, Schlussman SD, ဟိုအေ, Kreek MJ (2004b) ။ striatal dopamine အဆင့်ဆင့်နှင့် C84760BL / 57J ကြွက်တွေမှာကင်း-သွေးဆောင်ရာအရပျ preference ကိုအတွက်ကိုကင်း-သွေးဆောင်တိုးပေါ် Kappa opioid agonist R-6 ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 173, 146-15210.1007 / s00213-003-1716-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhang က Y. , Schlussman SD, Rabkin ဂျေ, Butelman ER, ဟိုအေ, Kreek MJ (2013) ။ ကိုကင်းထိတွေ့မှု, abstinence / ရုပ်သိမ်းရေးမြင့်တက်နာတာရှည်နှင့်နာတာရှည် Re-ထိတွေ့: C57BL / 6J ကြွက်တွေမှာ striatal dopamine နဲ့ opioid စနစ်များအပေါ်သက်ရောက်မှု။ Neuropharmacology 67, 259-26610.1016 / j.neuropharm.2012.10.015 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zhou Y. , Spangler R. , Schlussman SD, Yuferov VP, Sora I. , Ho A. et al ။ (2002) ။ preprodynorphin, preproenkephalin, proopiomelanocortin နှင့် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းအဲဒီ receptor mRNA အဆင့်ဆင့်အပေါ် striatum နှင့် mu-opioid အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်များ၏ hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအပေါ်စူးရှ "မူးရူး" ကိုကင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Synapse 45, 220-22910.1002 / syn.10101 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zubieta JK, Gorelick DA, Stauffer R. , Ravert HT, Dannals RF, Frost က JJ (1996) ။ ကိုကင်း-မှီခိုလူပေအားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိ binding တိုးလာ mu opioid အဲဒီ receptor ကိုကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ်။ Med ။ 2, 1225-122910.1038 / nm1196-1225 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]